LESSON 3320 Tue 31 Mar 2020 Free Online NIBBANA TRAINING from KUSHINARA NIBBANA BHUMI PAGODA -PATH TO ATTAIN PEACE and ETERNAL BLISS AS FINAL GOAL DO GOOD! PURIFY MIND AND ENVIRONMENT! Evenaseven year old can Understand. A seventy year old must practice. Say YES to Paper Ballots NO to EVMs/VVPATs to save Democracy, Liberty, Equality and Fraternityfor the welfare, happiness and peace for all Awakened aboriginal societies. is the HONEST VOICE of ALL ABORIGINAL AWAKENED SOCIETIES (VoAAAS) Dr B.R.Ambedkar thundered “Main Bharat Baudhmay karunga.” (I will make India Buddhist) All Aboriginal Awakened Societies Thunder ” Hum Prapanch Prabuddha Bharatmay karunge.” (We will make world Prabuddha Prapanch) https://en.wikipedia.org/wiki/World_population World population In demographics, the world population is the total number of humans currently living, and was estimated to have reached 7.8 billion people as of March 2020 COVID-19 Coronavirus Pandemic Last updated: March 29, 2020, 14:30 GMT Cases 683,694 Recovered 146,396 Pending cases 537,298 Death 32,156 7.8 Billion minus 32,156 are alive. May all those who are alive be ever happy, well and secure! May all live long! May all be calm, quiet, alert, attentive, and have equanimity mind withaclear understanding that everything is changing ! All Governments must provide online food and shelter for migrant workers by distributing the wealth of the countries equally among al sections of the societies asachoice is between starvation and infection. Hotel Workers Lose Jobs By Thousands In CA During Coronavirus WHO daily Situation Report COVID-19 / Other news
LESSON 3320 Tue 31 Mar 2020
COVID-19 curfew: Mayawati demands ‘relief package’ for poor
Bahujan Samaj Party (BSP) supremo Mayawati on Thursday appealed to the
Centre and state governments to arrangeasystematic “relief package” to
facilitate meal requirements of 130 crore poor of the country during
the 21-daycurfew to prevent coronavirus spread.
“After strict enforcement of 21 days curfew and restrictions on 130 crore poor/toiling masses of the
country, now the Central and state government should arrange a
systematic relief package to fill stomach of people to overcome their
problem of bread and livelihood. Pay attention to it immediately,”
Mayawati tweeted in Hindi.
The BSP chief further stressed on the private sector in the country and the needs of their employees atatime of curfew.
“Along with this the curfew imposed on the private sector in this
country and the various concessions given to them, the central and state
governments should ensure that the monthly wages are paid to the people
working there. People are also appealed to comply with government
directives,” she said.
In order to ensure sufficient supply
during the curfew, the Central government on Thursday announced the food
security scheme to benefit 80 crore people across the country. Under
the scheme, the government will provide food grains by2kg to7kg per
person through ration shops.
Please find the link to opening
remarks by WHO Director-General Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus at today’s
virtual press conference regarding COVID-19, on 30 March 2020:
जनसांख्यिकीय तथ्या population्कमा, विश्व जनसंख्या वर्तमानमा बसिरहेको
मानवको कुल स is्ख्या हो, र मार्च २०२० सम्ममा billion. billion अर्ब मानिस
पुगेको अनुमान गरिएको थियो।
COVID-१ Cor कोरोनाभाइरस महामारी
अन्तिम अपडेट: मार्च २,, २०२०, १:30::30० GMT
पुनः प्राप्त गरियो
पेन्डिंग केस 53 537,२ 29
8.8 बिलियन माइनस ,२,१6। जीवित छन्।
यस ब्रह्माण्डमा सबै संवेदनशील र गैर-भावनात्मक प्राणीहरू सँधै खुशी, राम्रो र सुरक्षित रहोस्!
सबै लामो बाँचोस्!
सबैले शान्त, शान्त, सतर्क, ध्यान दिएर र एक स्पष्ट समझको साथ एक समान दिमाग राख्दछन् कि सबै कुरा परिवर्तन हुँदैछ!
जागरूकता शिक्षाको साथ एक ब्यूँतायो
दुखाई एक उपहार हो
यसलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा,
यसलाई अँगाल्न सिक्नुहोस्।
त्यहाँ कुनै वृद्धि छैन
जब जागरूकको साथ ब्यूँझिएको एकलाई जब एकाग्रता अभ्यास गरेर उसले के कमायो भनेर सोध्यो।
उसले जवाफ दियो, “केही छैन!”
“यद्यपि, जागरूकता भएको ब्यूँझिएको एकले भने,
मलाई भन्न देउ
के मैले हरायो:
उमेर र मृत्यु। “
जागरूकता उद्धरणको साथ जागृत एकले हामीलाई डरको बारेमा के सिकाउँछ?
स्वतन्त्रताको लागि तपाईंको डरको व्यापार गर्नुहोस्।
“बुद्धिमानीपूर्वक बाँच्ने मान्छेले मृत्युसमेत डराउनु हुँदैन।”
“अस्तित्वको सम्पूर्ण रहस्य डराउनु हुँदैन। तपाईलाई के हुन्छ भनेर
नडराउनुहोस्, कसैमाथि पनि निर्भर हुनुहुन्न। तपाईले सबै सहयोग अस्वीकार
गरेको क्षण मात्र तपाईलाई छुटाइनेछ। “
“जब कसैलाई खराबीलाई मन नपर्न
आउँछ, शान्त महसुस हुन्छ, असल शिक्षा सुन्दा कोही रमाउँछ; जब यी भावनाहरू
हुन्छन् र उनीहरूको कदर गर्दछन्, व्यक्ति डराउँछ। ”
“अराजकता सबै मिश्रित चीजहरूमा अन्तर्निहित हुन्छ। लगनशील भई प्रयास गर्नुहोस्। ”
“निष्क्रिय हुनु मृत्युको छोटो मार्ग हो र लगनशील हुनु जीवनको मार्ग हो;
people id।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। foolish।। foolish।। foolish।।
foolish foolish foolish।। foolish। foolish foolish। foolish foolish।
foolish foolish। foolish foolish। foolish। foolish foolish।
“के भएको मैले देखेको छैन। मैले गर्नुपर्ने कुरा अझै देख्छु। ”
“विगतमा नबस्नुहोस्, भविष्यको सपना नलगाउनुहोस्, वर्तमान क्षणमा दिमागलाई केन्द्रित गर्नुहोस्।”
“एक हजार लडाई जित्नु भन्दा आफूलाई जित्नु राम्रो हो। त्यसो भए जीत तपाईको
हो। यो तपाईंबाट लिन सकिन्न, स्वर्गदूतहरू वा प्रेतहरूद्वारा होइन स्वर्ग
वा नरकले। ”
“आगमन भन्दा राम्रो यात्रा गर्नु राम्रो हो।”
“शान्ति भित्रबाट आउँछ। विना यसको खोजी नगर्नुहोस्। ”
“जीवनमा वास्तविक असफलता सबै भन्दा राम्रो व्यक्तिले जान्दछन्।”
“शंकाको बानी भन्दा डरलाग्दो अरू केही छैन। शंका व्यक्ति अलग गर्दछ। यो एक
विष हो जसले मित्रता बिच्छेद गर्दछ र रमाईलो सम्बन्ध तोड्दछ। यो काँडा हो
कि चिडचिन्छ र पीडा दिन्छ; तरवारले मार्छ। ”
“हजारौं मोमबत्तीहरू एकल मैनबत्तीबाट उज्यालो हुन सक्छ, र मैनबत्तीको जीवन छोटा हुँदैन। खुसी कहिल्यै बाँडिदै हुँदैन। ”
“हामी जे सोच्छौं हामी हौं। हामी जे सोचिरहेका छौं हाम्रो विचारले। हाम्रो बिचार संगै, हामी संसार बनाउँछौं। “
“हामी के सोच्छौं, हामी हुन्छौं।”
विचार र विचारहरू कार्य मार्फत अगाडि बढ्दछन्।
“एक जुग ड्रप द्वारा ड्रप भरिन्छ।”
“एउटा विचार जुन विकास गरी कार्यमा ल्याइन्छ त्यो एक विचार भन्दा बढी अवधारणा भन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”
“घृणा कुनै पनि समयमा घृणाको अन्त हुँदैन। घृणा अनुकम्पा मार्फत रोकिन्छ।
यो एक अपत्यारणीय कानून हो। “
“धनी र गरिब सबैको लागि अनुकम्पा राख्नुहोस्; प्रत्येकको कष्ट छ। कसै-कसैले धेरै पीडा दिन्छन् भने कोही थोरै। ”
“रीसलाई पक्रिराख्नु भनेको तातो कोइलालाई अरू कसैमा फ्याँक्ने मनसायले समात्नु जस्तो हो; तपाईं जलेको जस्तो हुनुहुन्छ। ”
“झगडाको बेलामा हामी क्रोध महसुस गर्दछौं हामीले सत्यको लागि प्रयास गर्न छाडिसकेका छौं, र आफ्नै लागि संघर्ष गर्न थालिसकेका छौं।”
“सबैलाई यो ट्रिपल सत्य सिकाउनुहोस्: उदार दिमाग, दयालु बोली, सेवा र करुणाको जीवनले मानवतालाई नयाँ बनाउँछ।”
“सबै कुरा बुझ्नु भनेको सबै कुरालाई क्षमा गर्नु हो।”
“तपाईंको रीसको लागि तिमीलाई सजाय दिइनेछैन, किनकि तपाईंको क्रोधले तिमीलाई सजाय दिनुहुनेछ।”
स्वस्थ दिमाग र शरीरले जीवनको लागि हामीलाई सशक्त बनाउँछ।
“प्रत्येक मानव आफ्नो स्वास्थ्य वा रोगको लेखक हो।”
“स्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो उपहार हो, सन्तुष्टि सबै भन्दा ठूलो धन, वफादारी सबै भन्दा राम्रो सम्बन्ध।”
“दिमाग र शरीर दुबैको स्वास्थ्यको रहस्य भनेको विगतका लागि शोक गर्नु,
भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्नु वा समस्याहरूको पूर्वानुमान गर्नु होइन, बरु
वर्तमान समयमा बुद्धिमानी र लगनशीलताका साथ बाँच्नु हो।”
स्वास्थ्यको आनन्द लिनको लागि, एक व्यक्तिको परिवारमा साँचो खुशी ल्याउन,
सबैलाई शान्ति ल्याउन, एक व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला अनुशासन पाउनु पर्छ र
आफ्नै मनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो दिमाग
नियन्त्रण गर्न सक्छ भने उसले जागरूकताका साथ ब्यूँझाउने बाटो भेट्टाउन
सक्छ र सबै बुद्धि र सद्गुण उहाँ स्वाभाविक रूपमा आउँनेछ। ”
“शरीरलाई राम्रो स्वास्थ्य राख्नु भनेको कर्तव्य हो … अन्यथा हामी आफ्नो दिमागलाई सुदृढ र सफा राख्न सक्षम हुनेछैनौं।”
“स्वास्थ्य बिना जीवन जीवन हुँदैन; यो रोग र मृत्युको छवि मात्र भोग्ने अवस्था हो। ”
जीवन र बस्ने
जीवन एक यात्रा हो र बुद्धि नर्थ स्टार हो।
“जसले जीवनको एकता अनुभव गर्दछ उसले आफैंलाई सबै प्राणीहरुमा देख्छ, र सबै
प्राणीहरु आफ्नै शरीरमा, र निष्पक्ष आँखाले सबैलाई हेर्छ।”
“जसरी मैनबत्ती आगो बिना जल्दैन, त्यसरी नै आत्मिक जीवन बिना मानिस बाँच्न सक्दैन।”
“जसरी पृथ्वीबाट खजानाहरू फेला पारिन्छ, त्यसरी नै सद्गुणहरू असल
गुणहरूबाट प्रकट हुन्छ, र बुद्धि शुद्ध र शान्त दिमागबाट प्रकट हुन्छ। मानव
जीवनको चक्रव्यूहबाट सुरक्षित रूपमा हिंड्नको लागि बुद्धिको ज्योति र
सद्गुणको मार्गनिर्देशन चाहिन्छ। ”
“जीवन दुःखकष्टमा छ।”
“खुट्टाले खुट्टाले खुट्टा महसुस गर्दछ जब यो खाली खुट्टाको साथ जमिन महसुस गर्दछ।”
“त्यहाँ दुष्टता हुनु आवश्यक छ ताकि राम्रोले यसको शुद्धता माथि प्रमाणित गर्न सक्दछ।”
“शुद्ध निस्वार्थ जीवन जिउनको लागि, प्रशस्तताको बीचमा कसैले पनि आफ्नो चीजको रूपमा गणना गर्नु हुँदैन।”
“जब तपाइँ सबै कुरा कत्तिको अचूक महसुस गर्नुहुन्छ तब तपाइँले आफ्नो टाउको झुकाउनुहुनेछ र आकाशमा हाँस्नुहुनेछ।”
“तपाईं पथ यात्रा गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईं नै पथ नै बन्नुहुन्न।”
“तपाईको काम तपाईको काम पत्ता लगाउनु हो र तपाईको सारा दिमागले तपाईलाई तपाईलाई यो दिनु हो।”
करुणा, जडान, र एकता
हामीसँग प्रभाव छ, र हामी यसको लायक छौं।
“सबै चीजहरू देखा पर्दछन् र कारणहरू र सर्तहरूको एकरूपताको कारण हराउँछन्।
केहि कहिल्यै पूर्ण रूपमा एक्लो छैन; सबै कुरा अरू सबै कुराको सम्बन्धमा
“महत्वाकांक्षा करुणा जत्तिकै हो, ढिला र प्रतिद्वन्द्वी दुबै।”
“एकता बाइनरी द्वारा मात्र प्रकट गर्न सकिन्छ। एकता आफै र युनिटीको विचार पहिले नै दुई छन्। ”
“तपाई सम्पूर्ण ब्रह्माण्डभर तपाईको लागि खोज गर्न सक्नुहुन्छ जो तपाईको
भन्दा तपाईको अनुकम्पा र स्नेहको योग्य छ र तपाई त्यो व्यक्ति कहिँ पनि
फेला पर्नुहुन्न। तपाईं आफैले, सारा ब्रह्माण्डमा जति कोही पनि तपाईंको
प्रेम र स्नेहको योग्य हुनुहुन्छ। ”
दिमाग, सोच, र सोच
हाम्रो विचारहरु हामीलाई आकार दिन्छ, र हाम्रो वरिपरिको दुनिया।
“सबै गलत कार्य दिमागको कारणले उत्पन्न हुन्छ। यदि दिमाग परिवर्तन भएको छ भने के गलत काम गर्न सकिन्छ?
“पागल र खराब साथी ज a्गली जनावरको भन्दा डराउँछ। एउटा ज wild्गली जनावरले
तिम्रो शरीरमा चोट पुर्याउन सक्छ, तर नराम्रो साथीले तिम्रो मुटुलाई चोट
“केहि पनि विश्वास नगर्नुहोस्, तपाईंले यसलाई कहाँ
पढ्नु भएको छ वा जसले यो भनेका छन, यदि मैले यो भनेको छु भने फरक पर्दैन,
जबसम्म यो तपाईंको आफ्नै कारण र तपाईंको आफ्नै विवेकसँग सहमत हुँदैन।”
“उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ जसलाई आफूले सक्षम छ जस्तो लाग्छ।”
“यो एक मान्छेको आफ्नै दिमाग हो, उसको शत्रु वा शत्रु होइन कि त्यसले उसलाई दुष्ट मार्गहरूतर्फ आकर्षित गर्दछ।”
“दिमाग भनेको सबै कुरा हो। तपाईलाई के भयो जस्तो लाग्छ। “
“जो आक्रोशित विचारबाट मुक्त हुन्छ उसले पक्कै पनि शान्ति पाउँछ।”
“आफूले पाएको कुरालाई बढ्तै नखोज, न अरूको इर्ष्या नगर। जसले अरूलाई ईर्ष्या गर्छ उसले मनोशान्ति पाउँदैन। ”
“म्युजहरू जस्ता सद्गुणहरू जहिले पनि समूहहरूमा देखा पर्दछन्। राम्रो सिद्धान्त कुनै पनि स्तनमा एक्लो पाउँदैनथ्यो। ”
“आफूलाई जित्नु अरूलाई जित्नु भन्दा ठूलो काम हो।”
“सद्गुणलाई दुष्टले बढी सताउँछ, भलाइले भन्दा उसलाई प्रेम गर्ने भन्दा।”
“हामी हाम्रो विचारले आकार दिन्छौं; हामी के सोच्छौं बन्ने गर्छौं। जब
दिमाग शुद्ध हुन्छ, आनन्द छायाँ जस्तो आउँछ जुन कहिल्यै छोडदैन। “
आफूलाई निराश नगर्नुहोस्।
“कसैले हामीलाई बचाउँदैन तर आफैलाई। कसैले पनि गर्न सक्दैन र कसैले पनि गर्न सक्दैन। हामी आफैंले हिंड्नै पर्छ। “
“आफ्नै मुक्ति काम गर्नुहोस्। अरूमा भर पर्दैन। ”
ध्यानपूर्वक तपाईका शब्दहरू छनौट गर्नुहोस्।
“कुकुरलाई राम्रो कुकुर ठानिदैन किनभने ऊ राम्रो बार्कर हो। कुनै मानिसलाई
असल मान्छे मानिदैन किनकि ऊ एक राम्रो कुराकानी गर्ने हो। ”
“एक हजार खाली शब्द भन्दा उत्तम, एक शब्दले शान्ति ल्याउँछ।”
“धारिलो चक्कु जस्तै जिब्रो … रगत को बिना चित्रण मार्छ।”
“बुद्धिमान्‌ मानिसहरूले आफ्नो सोचाइसहित बोल्ने शैली बनाउँदछ र त्यसलाई अन्नको रूपमा झारेर एक निचोमा पक्रिन्छ।”
“हामीले उच्चारण गर्ने जुनसुकै शब्द मानिसहरूले होशियारीका साथ छनौट
गर्नुपर्दछ र तिनीहरूको आवाज सुन्नेछ र राम्रो वा बिरामीको कारण तिनीहरूमा
यो हाम्रो वरिपरि छ।
पूर्व र पश्चिमको भेदभाव छैन; मानिसहरू आफ्नै दिमागबाट भिन्नताहरू सिर्जना
गर्छन् र त्यसपछि उनीहरूलाई साँचो हो भनेर विश्वास गर्छन्। “
“त्यहाँ सत्यको मार्गमा दुईवटा गल्तीहरू गर्न सकिन्छ; सबै दिशामा गइरहेको छ, र सुरु छैन। ”
“तीन चीजहरू लामो समयसम्म लुकाउन सकिदैन: सूर्य, चन्द्रमा र सत्य।”
क्लासिकल नेपालीमा सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड बुद्ध छवि गीत नृत्यको साथ बुद्धका आफ्नै शब्दहरू - शास्त्रीय म्यानमार (बर्मा)
Satipaṭṭhāna सुट्टा (MN 10) थर्डवाद बौद्ध धर्मको पाली क्याननमा दुई
महत्वपूर्ण र व्यापक अध्ययन भएका प्रवचनहरू (माइंडफुलनेसको स्थापना
सम्बन्धी छलफल) र महस्यातिपहचान सुत्त (DN २२) (दिमाग स्थापनाको बारेमा
महान अभ्यास) हो। यो पूर्वको अन्य स्कूलहरूको इगामामा पनि फेला पर्दछ, र
थिच नट हन् जस्ता समकालीन महायान चिकित्सकहरूले यसलाई अँगालेका छन्।
यी प्रवचनहरू (पाली: सुट्टा) विभिन्न प्रसx्गहरूमा र सम्भावित रूपमा
निरन्तरतामा मानसिकता अभ्यासको लागि एक साधन प्रदान गर्दछ। विद्वान्‌,
बुद्धले यस भनाइको सुरूमा घोषणा गरे: “यो सीधा मार्ग हो (पाली: एकान्यो …
म्याग्गो), भिक्षुहरू, जीवहरूको शुद्धिकरणका लागि, दु: ख र शोकको विजयको
लागि, दु: ख र शान्तिको लागि। शोक, सत्यको मार्गमा हिड्नका लागि, निब्बना
को प्राप्तिका लागि …. “
शीर्षकको अंग्रेजी अनुवाद, “Satipaṭṭhāna Sutt,” समावेश:
“माइंडफुलनेस वार्तालापको उत्थान” tipitaka / mn / mn.010.soma.html (सोमा, १ 1999 1999 1999)
“माइंडफुलनेस डिस्ककोसको फाउन्डेसनहरू” tipitaka / mn / mn.010.nysa.html (न्यानसट्टा, १ 199 199))
“सन्दर्भ चर्चा को फ्रेम” tipitaka / mn / mn.010.than.html (थानिसारो, १ 1995 1995))
अन्लायो (२०० 2006, पृ। २ – -–०), थानिसारो (२०००) र न्यानोपोनिका (१ 1996
1996,, पृ। – -१०) अनुसार यस शीर्षकको अनुवादको विविधताको कारणको अंश
यौगिक पाली शब्दसँग कसरी सम्बन्धित छ “। satipaṭṭhāna “विश्लेषण गरिएको छ।
यसलाई “सती-Paṭṭhāna” (”mindfulness को आधार”) वा “sati-upaṭṭhāna”
(”mindfulness को उपस्थिति”) को रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।
को पाली शीर्षकमा उपहास “महा-” को सम्बन्धमा यसको अर्थ केवल “महान” वा
“ठूलो” हो र सम्भवतः चौथो महान सत्यताको जागरणको बारेमा DN २२ को विस्तारित
बिभिन्न कारणहरू र क्यानोनिकल प्लेसमेन्ट
चिनियाँ क्याननमा, नर्व चू जिing (念 處 經, स्मृतिस्पास्ना सूत्र), एक
सर्वस्वादीन स्रोतमा आधारित, ताइशो त्रिपिटाक खण्डको पृष्ठ 58 58२ मा फेला
पर्‍यो। १, मध्यमा Āगामा नं २.। स्मृतुपष्ठाण सेत्रको दोस्रो संस्करण
तिब्बतीमा अनुवाद गरिएको थिएन, बाहेक लामो प्रजापरामिता सत्रको अंशको रूपमा
यसलाई समाहित गरिएको थियो। तिब्बती अनुवादमा अवस्थित छ “सद्धर्म
स्मृतिस्पर्णा सूत्र” (बाँध पिए चोस ड्रान पय बार बारहाक पै एमडीओ / डेम्पे
चद्रेन पन्य बार्जक पी डू) तर यो धेरै ठूलो प्रारम्भिक महायान सूत्र हो र
यो एकदम भिन्न छ। पाठ भेन अज्ञाहन सुजाटोले सुत्तको बिभिन्न सम्बन्धको
विस्तृत तुलनात्मक सर्वेक्षण पूरा गरे जसको शीर्षक ए हिस्ट्री अफ
माइन्डफुलनेस थियो। यी विभिन्न संस्करणहरू धेरै समान छन्।
पाली क्याननमा, सतीपहन्ना सुत्त मजहिमा निकया (MN) मा दशौं प्रवचन हो र
यसैले प्रायः “MN 10″ द्वारा तोकिएको हुन्छ; क्याननको पाली टेक्स्ट सोसाइटी
(PTS) संस्करणमा, यो पाठ यसको तीन-खण्ड माज्जिमा निकया (एम) को पहिलो
खण्डको th 55 औं पृष्ठमा शुरू हुन्छ, र यसरी वैकल्पिक रूपमा “एम आई 55 55।”
महसतीपाṭṭहण सुट्टाका लागि, यो दीघा निकया (DN) मा २२ औं प्रवचन हो र
प्रायः “DN २२” द्वारा पदनाम गरिएको छ; क्याननको पीटीएस संस्करणमा,
महासतीपहन्ना सुत्त पीटीएसको तीन खण्ड दिघा निकया (डी) को दोस्रो खण्डको २9
th पृष्ठमा शुरू हुन्छ, र यसरी वैकल्पिक रूपमा “D ii २9।” भनेर
पोस्ट-क्यानोनिकल पाली साहित्यमा, सतीपहिणा
सुत्त (साथै सम्पूर्ण मज्जिमा निकयाका लागि) का क्लासिक टिप्पणी
बुद्धघोसाको पापाकासुदानी (बुलिट, २००२; सोमा, २०० 2003) मा पाइन्छ।
यस सुत्तमा बुद्धले मानसिकता (सत्यपत्थान) स्थापनाका लागि चार सन्दर्भहरू
पहिचान गर्दछ: शरीर, संवेदना (वा भावनाहरू), दिमाग (वा चेतना) र मानसिक
सामग्री। यिनीहरूलाई पछि निम्न सेक्सन र उपखंडहरूमा विभाजित गरिन्छ:
सास फेर्दै (अनापानसती सुत्त पनि हेर्नुहोस्)
आसनहरू (हिंडाई, स्ट्यान्डि,, सिटि,, लिying्ग)
स्पष्ट तुलना गर्नुहोस्
शरीर को विकृतिमा प्रतिबिम्ब
भौतिक तत्वहरूमा प्रतिबिम्ब
अनुभूति / भावना (वेदानु)
रमाईलो वा अप्रिय वा कुनै पनि सुखद-नहुने-अप्रिय (तटस्थ) भावनाहरू
सांसारिक वा आध्यात्मिक भावनाहरु
दिमाग / चेतना (Cittā)
अभिलाषा (sarāgaṃ) वा वासना बिना (vītarāgaṃ)
घृणा (सदोसाṃ) वा घृणा बिना (vītadosaṃ)
भ्रम (समोह) वा भ्रम बिना (vītamohaṃ)
सम्झौता (saṅkhittaṃ) वा छरिएको (vikkhittaṃ)
ठूलो (mahaggataṃ) वा उच्च होइन (amahaggataṃ)
पार गर्न सकिने (sa-uttaraṃ) वा असुरक्षित (anuttaraṃ)
शान्त (samāhitaṃ) वा शान्त छैन (asamāhitaṃ)
(vimuttṃ) रिलिज भयो वा रिलीज गरिएको छैन (avimuttṃ)
क्लिलि ofको समुच्चय
सेन्से-बेस र उनीहरूका फेटरहरू
जागरूकता संग जागृति को कारकहरु
एनाल्यो (२०० 2006, pp। २–-२–) र सोमा (२०० 2003, pp। Xxii - xxiv) अनुसार
पापाकासुदानीले एक व्यक्तिमा निर्भरता फरक फरक satipaṭṭhāna सिफारिस
अधिक मायालु लालसा वा बौद्धिक अनुमान को लागी अधिक झुकाव; र,
उनीहरूको प्रतिक्रिया वा द्रुत प्रतिक्रियामा अधिक मापन गरिएको छ।
यी दुई आयामहरूको आधारमा कमेन्ट्रीले सिफारिश गरेको व्यक्तित्वमा आधारित सतिपहन्ना तलको ग्रिडमा झल्किन्छ।
स्वभाव सुस्त शरीर दिमाग
सोमा (२०० 2003, पृ। Xxiv) थप्दछन् कि सबै चिकित्सकहरूले (उनीहरूको चरित्र
र स्वभावको पर्वाह नगरी) आसन (माइन्डि (, स्टेन्डि sitting, सिट, लेटेर) र
माइक्रेन्ड बुझ्ने अभ्यास पनि गर्नुपर्दछ, जसको बारेमा उनी लेख्छन्:
“सम्पूर्ण अभ्यासको अभ्यास mindfulness यहाँ उल्लेख दुई भागहरु मा समावेश
अभ्यास को सही पकड मा निर्भर गर्दछ। “
एकल केन्द्रित, क्रमिक र एक साथ अभ्यासहरू
त्यहाँ सतिपहन्ना सुत्तमा वर्णन गरिएका विधिहरू प्रयोग गर्न सक्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्:
एकल विधिमा फोकस गर्नुहोस्। अ most्ग्रेजी भाषामा सबैभन्दा बढी लेख्ने विधि भनेको सासप्रतिको मानसिकता हो।
उत्तराधिकारमा अलग अलग तरिकाहरू अभ्यास गर्नुहोस्।
सांस दिमागलाई प्राथमिक वस्तुको रूपमा कायम राख्नुहोस् जबकि अन्य
विधिहरू प्रयोग गर्दा सास फेर्न नसकिने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहोस्।
या तानडेममा वा प्रस driven्ग चालित तरीकामा बहुविध अभ्यास गर्नुहोस्
माइंडफुलनेस (बौद्ध धर्म)
सदयाताना / अयाना
ज्ञानको सात कारक
विकिपेडिया: सतीपट्टन सुट्टा
महिस्तिपाṭṭना सुत्त - जागरूकतामा उपस्थिति - सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड बुद्ध
छवि, गीत, शास्त्रीय नेपालीमा नृत्य - शास्त्रीय म्यानमार (बर्मा)
सतीपत्थान सुट्टा (माइंडफुलनेसको जगमा सम्बोधन)
.9 77..9 के ग्राहकहरु
कोलम्बो, डिसेम्बर २१, २०१ in मा निजी निवासमा बिहान वार्ता
क्रिएटिव कमन्स एट्रिब्युसन इजाजतपत्र (पुनः प्रयोग अनुमति छ)
Mahsatipaṭṭhāna Sutt - जागरूकता मा उपस्थिति 29)) शास्त्रीय अंग्रेजी, रोमन,
यो सुत्त व्यापक ध्यान ध्यान अभ्यास को लागी एक आधारभूत सन्दर्भ को रूप मा मानिन्छ।
I. कायाको अवलोकन
ए अनुभाग ānāpāna मा
B. आसनमा खण्ड
सी। सम्पजा मा सेक्शन
D. खण्डन खण्डन
E. तत्वहरूमा सेक्सन
एफ। नौ चार्नेल मैदानमा सेक्सन
II। वेदानाको अवलोकन
III Citta को अवलोकन
IV। धम्माको अवलोकन
ए Nvvaraṇas मा खण्ड
ख। खण्डहरूमा खण्ड
सी। सेन्स क्षेत्रहरूमा सेक्शन
D. Bojjhaṅgas मा सेक्सन
ई। सत्य मा खण्ड
E1। Dukkhasacca को प्रदर्शन
E2। समुदायासका प्रदर्शन
E3। निरोधकको प्रदर्शन
E4। म्याग्गासाका प्रदर्शन
एउटा अवसरमा, भगव कुरुसको बजार सहर कम्मासधाम्मा कुरुहरूको माझ बसिरहेको थियो। त्यहाँ उनले भिख्खसलाई सम्बोधन गरे:
- भिख्खस। भददन्तेले जवाफ दिए भगवले भनेः
- यो, भिख्खुस, त्यो मार्ग हो जसले मानिसहरुको शुद्धिकरण, दु: ख र विलापको
पराजय, दुक्खा-डोमनास गायब हुनु, सही मार्गको प्राप्ति, निब्बनाको बोध,
अरु चारैतिर जान्छ। satipaṭṭhānas।
कुन चार? यहाँ, भिख्खस, भिख्खु
संसारको तर्फ अभिज्या-डोमानास छोडेपछि, काल्पनिक आतिपा सम्जानो, सामिā्गमा
केयाको अवलोकन गर्दछ। ऊ वेदानुमा, वेदनेस, सम्पत्तिजानो, सतीमाको अवलोकन
गर्दै, संसारको तर्फ अभिज्या-डोमानासा छोडे। उनी सिट्टामा सिट्टा अवलोकन
गर्दैछन्, amptāpī samjīāno, satiā, abhijjhā-domanassa को संसारमा
छोडेपछि। ऊ धम्ममा धम्मका अवलोकन गर्दछ, धम्पा सम्पत्ति, सामति, संसारको
तर्फ अभिज-डोमानास छोडेपछि।
र कसरी, भिख्खस, भिख्खुले कयामा कायाको अवलोकन गर्दछ? यहाँ भिख्खस,
भिख्खु, ज forest्गलमा गयो वा रूखको जरामा गयो वा खाली कोठामा गयो र खुट्टा
क्रसकी छेउमा बसेर, कायालाई ठाडो गरी, र सती परमुखा सेट गर्यो। यस
प्रकारको sato भएको कारण उनी सास फेर्छन्, यसरी sato हुँदा उनी सास
फेर्छन्। लामो सास फेर्दै ऊ बुझ्छ: ‘म लामो सास फेर्दै छु’; लामो सास
फेर्दै ऊ बुझ्छ: ‘म लामो सास फेर्दै छु’; छोटो मा सास उनी बुझ्दछन्: ‘म
छोटोमा सास गर्दैछु’; श्वास बाहिर छोटो उहाँ बुझ्नुहुन्छ: ‘म बाहिर सास
फेर्दै छु’; उसले आफैंलाई तालिम दिन्छ: ‘सम्पूर्ण कायालाई महसुस गर्दै, म
सास फेर्छु’; उसले आफैंलाई तालिम दिन्छ: ‘सम्पूर्ण कायालाई महसुस गर्दै म
सास फेर्छु’; उसले आफैंलाई तालिम दिन्छ: ‘काया सखारसलाई शान्त गर्दैछ, म
सास फेर्छु’। उनी आफैंलाई तालिम दिन्छन्: ‘काया सख्याहरू शान्त गर्दैछु, म
जसरी, भिख्खस, एक निपुण टर्नर वा टर्नरको प्रशिक्षु,
जसले लामो मोड लिन्छ, बुझ्दछ: ‘म लामो मोडमा छु’; छोटो मोड बनाउँदा, उसले
बुझ्छ: ‘म छोटो मोड गर्दैछु’; त्यस्तै गरी, भिख्खस, भिख्खु, लामो सास लिदै,
बुझ्छ: ‘म लामो सास फेर्दैछु’; लामो सास फेर्दै ऊ बुझ्छ: ‘म लामो सास
फेर्दै छु’; छोटो मा सास उनी बुझ्दछन्: ‘म छोटोमा सास गर्दैछु’; श्वास
बाहिर छोटो उहाँ बुझ्नुहुन्छ: ‘म बाहिर सास फेर्दै छु’; उसले आफैंलाई तालिम
दिन्छ: ‘सम्पूर्ण कायालाई महसुस गर्दै, म सास फेर्छु’; उसले आफैंलाई तालिम
दिन्छ: ‘सम्पूर्ण कायालाई महसुस गर्दै म सास फेर्छु’; उसले आफैंलाई तालिम
दिन्छ: ‘काया सखारसलाई शान्त गर्दैछ, म सास फेर्छु’। उनी आफैंलाई तालिम
दिन्छन्: ‘काया सख्याहरू शान्त गर्दैछु, म सास फेर्छु।’
कायाको आन्तरिक रूपमा अवलोकन गर्दछ, वा ऊ कायामा बाह्यरूपमा अवलोकन गर्दछ,
वा ऊ कायाको आन्तरिक र बाह्य अवलोकन गर्दछ। ऊ कायामा घटनाको सामुदायिक
अवलोकन गर्दछ, वा ऊ कायामा घट्ने घटनाको अवलोकन गर्दछ, वा ऊ सम्युदयको
अवलोकन गर्दछ र कायामा घटना बितेर जान्छ; वा अन्य, [साकार गर्दै:] “यो kāya
हो!” सती उहाँमा अवस्थित छ, केवल सीस र मात्र प्यासीसातीको हदसम्म, उहाँ
अलग्गै बस्नुहुन्छ, र संसारको कुनै पनि कुरासँग टाँसिरहनुहुन्न। तसर्थ,
भिख्खस, भिख्खु कायामा देख्दछन्।
भिख्खस, भिख्खु, हिंड्दा, बुझ्छ: ‘म हिंड्दै छु’, वा उभिएर उसले बुझ्दछ: ‘म
उभिरहेको छु’, वा बसेर उसले बुझ्दछ: ‘म बसेछु’, वा ढल्केर बस्दा उसले
बुझ्दछ: ‘ म सुत्दै छु ‘। वा अर्को, जुनसुकै स्थितिमा उसको काया डिस्पोज
गरिएको छ, उसले यसलाई तदनुसार बुझ्दछ।
यसैले ऊ कायाको आन्तरिक रूपमा
अवलोकन गर्दछ, वा ऊ कायामा बाह्यरूपमा अवलोकन गर्दछ, वा ऊ कायाको आन्तरिक र
बाह्य अवलोकन गर्दछ। ऊ कायामा घटनाको सामुदायिक अवलोकन गर्दछ, वा ऊ कायामा
घट्ने घटनाको अवलोकन गर्दछ, वा ऊ सम्युदयको अवलोकन गर्दछ र कायामा घटना
बितेर जान्छ; वा अन्य, [साकार गर्दै:] “यो kāya हो!” सती उहाँमा अवस्थित छ,
केवल सीस र मात्र प्यासीसातीको हदसम्म, उहाँ अलग्गै बस्नुहुन्छ, र संसारको
कुनै पनि कुरासँग टाँसिरहनुहुन्न। तसर्थ, भिख्खस, भिख्खु कायामा देख्दछन्।
यसैबीच, भिख्खु, भिख्खु, नजिक आउँदा र प्रस्थान गर्दा, सम्जाजासँग कार्य
गर्दछ, अगाडि हेर्दा र वरिपरि हेर्दा, उसले सम्जाजासँग कार्य गर्दछ,
झुम्काउँदा र तानिरहेको बेला, उसले पोशाक र माथिको पोशाक लगाएको बेलामा
सम्जाजासँग कार्य गर्दछ। कचौरा बोक्दा उसले सम्पजासँग काम गर्दछ, खाँदा,
पिउँदा, चबाउँदा, स्वाद लिँदा, उसले सम्जाजसँग काम गर्छ, शौच गर्ने र पेशाब
गर्ने व्यवसायमा जाँदा, उसले सांपजासँग कार्य गर्दछ, हिंड्दा, उभिरहेको
बेला , निदाइरहेको बेला, ब्यूँझिरहेको बेला, कुरा गरिरहेको बेला र चुपचाप
हुँदा, उसले सम्जाजासँग कार्य गर्दछ।
D. खण्डन तिरस्कार
यसबाहेक, भिख्खसले यस शरीरलाई खुट्टाको तल्कादेखि र टाउकोको कपालबाट तल
मान्दछ, जुन यसको छालाले सीमेट गरिएको छ र विभिन्न प्रकारका अशुद्धताहरूले
भरिएको छ: “यस कायामा केशहरू छन्? टाउकोको, शरीरको कपाल, न nails, दाँत,
छाला, मासु, कण्डरा, हड्डी, हड्डी मज्जा, मृगौला, मुटु, कलेजो, प्लीउरा,
प्लीहा, फोक्सो, आन्द्रा, mesentery, पेट यसको सामग्री संग, मल, पित्त, कफ ,
मवाद, रगत, पसिना, बोसो, आँसु, ग्रीस, लार, नाक बलगम, synovial तरल पदार्थ
र मूत्र। “
जसरी भिख्खुस, त्यहाँ एउटा झोला थियो जसमा दुईवटा
खोलिएको थियो र विभिन्न प्रकारका अन्नले भरिएको थियो, जस्तै पहाड-धान, धान,
मुंग, गाई-मटर, तिल र भुसेको चामल। राम्रा दृष्टि भएका एक व्यक्तिले यसमा
ध्यान दिएर हेर्छ: “यो पहाड-धान हो, धान हो, ती दालहरू छन्, ती गाई-मटरहरू
हुन्, ती तिलका गेडाहरू हुन् र यसमा भुसुला छ;” त्यस्तै गरी, भिख्खुले यस
शरीरलाई खुट्टाको तल्काबाट र टाउकोको कपालबाट तल मान्दछ, जुन आफ्नो छालाले
सीमेट गरिएको छ र विभिन्न प्रकारका अशुद्धताहरूले भरिएको छ: “यस कायामा,
त्यहाँ टाउकोको कपाल, शरीरको कपाल, नाखून, दाँत, छाला, मासु, कण्डरा,
हड्डी, हड्डी मज्जा, मृगौली, मुटु, कलेजो, प्लीउरा, प्लीहा, फोक्सो,
आन्द्रा, mesentery, पेट यसको सामग्री संग, मल, पित्त, कफ, पुस, रगत,
पसिना, चिल्लो, आँसु, तेल, लार, नाक बलगम, synovial तरल पदार्थ र मूत्र। “
यसैले ऊ कायाको आन्तरिक रूपमा अवलोकन गर्दछ, वा ऊ कायामा बाह्यरूपमा
अवलोकन गर्दछ, वा ऊ कायाको आन्तरिक र बाह्य अवलोकन गर्दछ। ऊ कायामा घटनाको
सामुदायिक अवलोकन गर्दछ, वा ऊ कायामा घट्ने घटनाको अवलोकन गर्दछ, वा ऊ
सम्युदयको अवलोकन गर्दछ र कायामा घटना बितेर जान्छ; वा अन्य, [साकार
गर्दै:] “यो kāya हो!” सती उहाँमा अवस्थित छ, केवल सीस र मात्र
प्यासीसातीको हदसम्म, उहाँ अलग्गै बस्नुहुन्छ, र संसारको कुनै पनि कुरासँग
टाँसिरहनुहुन्न। तसर्थ, भिख्खस, भिख्खु कायामा देख्दछन्।
यसबाहेक, भिख्खस, भिख्खुले यसै कायालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, यद्यपि यो
राखिएको छ, तर यसलाई तत्वहरू मिलेर निकालिन्छ: “यस कायामा पृथ्वीको तत्त्व,
जल तत्व, अग्नि तत्व र वायु तत्व रहेको छ।”
जसरी भिख्खस, निपुण
कसाई वा कसाई प्रशिक्षार्थीले एउटा गाईलाई मारे पछि त्यसलाई काटेर एक
चौबाटोमा चढेर टुक्रा-टुक्रा पार्छ; त्यस्तै गरी, भिख्खसले पनि यस कियलाई
प्रतिबिम्बित गर्दछ, यद्यपि यो राखिएको छ, “तर यो कायामा पृथ्वीको तत्त्व,
यसैले ऊ कायाको आन्तरिक
रूपमा अवलोकन गर्दछ, वा ऊ कायामा बाह्यरूपमा अवलोकन गर्दछ, वा ऊ कायाको
आन्तरिक र बाह्य अवलोकन गर्दछ। ऊ कायामा घटनाको सामुदायिक अवलोकन गर्दछ, वा
ऊ कायामा घट्ने घटनाको अवलोकन गर्दछ, वा ऊ सम्युदयको अवलोकन गर्दछ र
कायामा घटना बितेर जान्छ; वा अन्य, [साकार गर्दै:] “यो kāya हो!” सती
उहाँमा अवस्थित छ, केवल सीस र मात्र प्यासीसातीको हदसम्म, उहाँ अलग्गै
बस्नुहुन्छ, र संसारको कुनै पनि कुरासँग टाँसिरहनुहुन्न। तसर्थ, भिख्खस,
भिख्खु कायामा देख्दछन्।
यसबाहेक, भिख्खस, भिख्खु, जसरी
उसले मृत शरीर देखिरहेको थियो, चर्नल भूमिमा फ्याँकिएको छ, काटिएको
हड्डीहरू यहाँ र त्यहाँ छरिएका छ, यहाँ एक हातको हड्डी, एक खुट्टाको हड्डी,
एक पाin्ग हड्डी यहाँ, एउटा फिलाको हड्डी, त्यहाँ हिप हड्डी, यहाँ पसली,
त्यहाँ फिर्ता हड्डी, यहाँ घाँटीको हड्डी, यहाँ बaw्गारा हड्डी, दाँतको
हड्डी, वा त्यहाँ खोपडी, उसले यसलाई धेरै केडिया ठान्छ : “यो क्याया पनि
यस्तै प्रकृतिको हो, यो यस्तै हुने छ, र यस्तो अवस्थाबाट स्वतन्त्र छैन।”
यसैबीच, भिख्खस, भिख्खु, जसरी उसले मृत शरीर देखिरहेको थियो, बल्छीको
भुईँमा फ्याँकिदिएको, हड्डीहरू सिशेलजस्तो सेतो र he्गले, उसले यसलाई एकदमै
केडिया ठान्छ: “यो क्याया पनि त्यस्तै प्रकृतिको हो, जाँदैछ यो जस्तो
बन्नु, र यस्तो अवस्थाबाट स्वतन्त्र छैन। “
उसले मृत शरीर देखिरहेको थियो, झ्यालको मैदानमा फ्याँकिएको थियो, हड्डीहरू
एक वर्षको उमेरमा ढाकेका थिए, उनी यस कुरालाई धेरै मान्दछन्: “यो कया पनि
त्यस्तै प्रकृतिको हो, यो हो यो जस्तो बन्न गइरहेको छ, र यस्तो अवस्थाबाट
स्वतन्त्र छैन। “
यसैले ऊ कायाको आन्तरिक रूपमा अवलोकन गर्दछ, वा ऊ
कायामा बाह्यरूपमा अवलोकन गर्दछ, वा ऊ कायाको आन्तरिक र बाह्य अवलोकन
गर्दछ। ऊ कायामा घटनाको सामुदायिक अवलोकन गर्दछ, वा ऊ कायामा घट्ने घटनाको
अवलोकन गर्दछ, वा ऊ सम्युदयको अवलोकन गर्दछ र कायामा घटना बितेर जान्छ; वा
अन्य, [साकार गर्दै:] “यो kāya हो!” सती उहाँमा अवस्थित छ, केवल सीस र
मात्र प्यासीसातीको हदसम्म, उहाँ अलग्गै बस्नुहुन्छ, र संसारको कुनै पनि
कुरासँग टाँसिरहनुहुन्न। तसर्थ, भिख्खस, भिख्खु कायामा देख्दछन्।
यसैबीच, भिख्खु, भिख्खु, जसरी उसले मृत शरीर देखिरहेको थियो, भुईँमा
फ्याँकिएको छ, सडेको हड्डीहरू पाउडरमा घटाइएको छ, उसले यसलाई एकदमै केडिया
ठान्छ: “यो क्याया पनि त्यस्तै प्रकृतिको हो, जाँदैछ यो जस्तो बन्नुहोस्, र
यस्तो अवस्थाबाट स्वतन्त्र छैन। “
यसैबीच, भिख्खस, भिख्खु, जसरी उसले मृत शरीर देखिरहेको छ, एउटा चनेल
मैदानमा फ्याँकिएको छ, एक दिन मरेका, वा दुई दिन मरेका वा तीन दिन मरेका,
सुलेको, निलो र चिसो, उनी यस कुरालाई धेरै मान्दछन्: ” यो क्याया पनि यस्तै
प्रकृतिको हो, यो यस्तै हुने छ, र यस्तो अवस्थाबाट स्वतन्त्र छैन। “
यसैबीच, भिख्खस, भिख्खु जसरी उसले मृत शरीर देखिरहेको थियो, बल्दै गरेको
भुईँमा फ्याँकिदिए, कागलाई खाईदै छ, गिद्धहरूले खाए, गिद्धहरूले खाए,
कुकुरहरूले खाए, बाघले खाए, पेन्टरहरूले खाए, बिभिन्न किसिमका प्राणीहरूले
खाए, उनी यस कुरालाई धेरै नै माया मान्दछन्: “यो क्याया पनि त्यस्तै
प्रकृतिको हो, यो यस्तै बन्न गइरहेको छ, र यस्तो अवस्थाबाट स्वतन्त्र छैन। “
यसबाहेक, भिख्खस, भिख्खु, जसरी उसले एउटा मृत शरीर देखिरहेको छ, जसलाई
शरीरको रगतले छोपेको एउटा खाडलमा फ्याँकिएको छ, र रगतसहित समातिएको, उसले
यो कुरालाई धेरै मान्दछ: “यो क्यया पनि त्यस्तै हो प्रकृति, यो यस्तो बन्न
यसैले ऊ कायाको
आन्तरिक रूपमा अवलोकन गर्दछ, वा ऊ कायामा बाह्यरूपमा अवलोकन गर्दछ, वा ऊ
कायाको आन्तरिक र बाह्य अवलोकन गर्दछ। ऊ कायामा घटनाको सामुदायिक अवलोकन
गर्दछ, वा ऊ कायामा घट्ने घटनाको अवलोकन गर्दछ, वा ऊ सम्युदयको अवलोकन
गर्दछ र कायामा घटना बितेर जान्छ; वा अन्य, [साकार गर्दै:] “यो kāya हो!”
सती उहाँमा अवस्थित छ, केवल सीस र मात्र प्यासीसातीको हदसम्म, उहाँ अलग्गै
उसले एउटा मृत शरीर देखिरहेको छ, जसलाई शरीरको शरीरबाट निकालेको र एउटा
रगतले मिसाएको, खाडलमा फ्याँकिएको छ, र रगतले मिसाएको छ, उनले यस कुरालाई
धेरै मान्दछन्: “यो क्यया पनि हो यस्तो प्रकृति, यो यस्तै बन्न गइरहेको छ, र
शरीरको रगत बिना कुहिनो, एउटा छालाको मैदानमा फ्याँकिएको छ, र रons्गको
बगैंचामा राखिएको छ, उनले यो कुरालाई धेरै मान्दछन्: “यो क्याया पनि
त्यस्तै हो। प्रकृति, यो यस्तो बन्न गइरहेको छ, र यस्तो अवस्थाबाट
ऊ मानलाई बुझ्दछ, ऊँ धम्मा बुझ्छ, ऊ यी दुईको
कारणले उत्पन्न हुने सय्योजाना बुझ्छ, ऊ असह्य सय्योजान कसरी आउँछ भनेर
उसले बुझ्छ, उठेको सय्योजान कसरी त्यागिएको छ भनेर उसले बुझ्छ, र कसरी
परित्याग गरिएको सय्योजान उत्पन्न हुँदैन भनेर उसले बुझ्छ। भविष्यमा।
यसैले ऊ आन्तरिक रूपले धम्मामा धम्मा अवलोकन गर्दछ, वा ऊ धम्मा बाह्यरूपमा
देख्दछ, वा ऊ आन्तरिक र बाह्य धम्ममा धम्मा अवलोकन गर्दछ। ऊ धम्मामा
घटनाको सामुदायिक अवलोकन गर्दछ, वा ऊ धम्मामा घट्ने घटनालाई हेर्दछ, वा ऊ
समदुयालाई अवलोकन गर्दछ र धम्मामा घटनाको बितेर जान्छ; वा अन्य, [साकार
गर्दै:] “यी धम्महरू हुन्!” सती उहाँमा अवस्थित छ, केवल सीस र मात्र
टाँसिरहनुहुन्न। यसैकारण, भिख्खु, छ भित्री र बाह्य āYatanas को संदर्भ मा,
धम्म मा dhamas देख्नुहुन्छ।
यसका साथै, भिख्खस, सात बुज्जागसको सन्दर्भमा धम्मामा धम्मा देख्दछन्। र
यसका साथै, भिख्खूस, कसरी सात बुज्जागसको सन्दर्भमा भिख्खूले धम्माको धम्मा
यहाँ, भिख्खस, भिख्खु, त्यहाँ सती सम्बोजाṅ्गा
भित्र रहेकोले बुझ्छ: “म भित्र सती सम्बोजाj्गा छ”; त्यहाँ सती
सम्बोजाṅ्गाको उपस्थित नभई उनी बुझ्दछन्: “म भित्र सती सम्बोजाj्गा छैन”; ऊ
बुझ्दछ कसरी अनारिजन सती सम्बोजाj्गा आउँछ; ऊ बुझ्दछ कसरी उठेको सती
सम्बोजागा पूर्णतामा विकसित हुन्छ।
त्यहाँ धम्मविचाय सम्बोजाṅ्गाको
उपस्थित भैरहेछ, उनीहरु बुझ्दछन्: “म भित्र धम्माविच सम्बोजाṅ्गा छ”;
त्यहाँ धम्मविच्य सम्बोजाṅ्गाको अस्तित्व नभएकोले उनी बुझ्दछन्: “म भित्र
कुनै धम्मविच्य सम्बोजाṅ्गा छैन”; ऊ बुझ्दछ कसरी अनारिजन धम्मविच
सम्बोजाj्गा आउँछ; ऊ बुझ्दछ कसरी उठेको धम्मवीच सम्बोजाṅ्गा सिद्धतामा
त्यहाँ भेरिया सम्वोजाṅ्गा भित्र रहेकोले उसले बुझ्छ:
“म भित्र भेरिया सम्बोजाṅ्गा छ”; त्यहाँ भेरिया सम्बोजाṅ्गाको अस्तित्व
नभएकोले उनी बुझ्दछन्: “मभित्र कुनै वैरिय सम्बोजागा छैन”; ऊ बुझ्दछ कसरी
अनियार्सिन वारिया सम्बोजाṅ्गा आउँछन्; ऊ बुझ्दछ कसरी उठेको वरिया
सम्बोजागा पूर्णतामा कसरी विकसित हुन्छ।
त्यहाँ भित्र पत्ती
सम्बोजाṅ्गा रहेको छ, उनीहरु बुझ्दछन्: “म भित्र पत्ती सम्बोजाj्गा छ”;
त्यहाँ भित्र पत्ती सम्बोजागा छैन, उनी बुझ्छन्: “म भित्र कुनै पत्ती
सम्बोजागा छैन”; ऊ बुझ्दछ कि कसरी unarisen pīti sambojjhaṅga आउँदछ; ऊ
बुझ्दछ कि कसरी उठ्दछन् पुति सम्बोजाṅ्गा पूर्णतामा विकसित हुन्छ।
त्यहाँ Passaddhi sambojjhaṅga उपस्थित भइरहेको छ, उनीहरु बुझ्छन्: “त्यहाँ
Passaddhi sambojjhaṅga मेरो भित्र छ”; त्यहाँ पासदधी सम्बोजाj्गाको
उपस्थित नभएकोले उनी बुझ्दछन्: “म भित्र कुनै पासद्धि सम्बोजाṅ्गा छैन”; ऊ
बुझ्दछ कसरी अनारिन पासदधी सम्बोजाṅ्गा आउँछ; ऊ बुझ्दछ कसरी उठेको पासदधी
सम्बोजाṅ्गा सिद्धतामा परिणत भएको छ।
त्यहाँ समिधि सम्बोजाṅ्गाको
उपस्थित भैरहेछ, उनीहरु बुझ्दछन्: “मेरो भित्र सामदि सम्बोजाṅ्गा छ”;
त्यहाँ समिधि सम्बोजागाह भित्र भइरहेको छैन, उनीहरु बुझ्दछन्: “म भित्र
कुनै सम्बन्धी सम्भव छैन”; ऊ बुझ्दछ कसरी अनारिसिन सम्बन्धी सम्बोजाṅ्गा
आउँछन्; ऊ बुझ्दछ कि कसरी उठेको समधि सम्बोजागा पूर्णतामा विकसित हुन्छ।
त्यहाँ भित्र उपेकखा सम्बोजाṅ्गा रहेको छ, उनी बुझ्छन्: “मेरो भित्र
उपेकखा सम्बोजाj्गा छ”; त्यहाँ भित्र उपेकखा सम्बोजागा छैन, उनी बुझ्छन्:
“म भित्र कुनै उपेखा सम्बोजागा छैन”; ऊ बुझ्दछ कसरी अपारदर्शी उपेखा
सम्बोजाj्गा आउँछन्; ऊ बुझ्दछ कि कसरी उठेको upekkhā sambojjhaṅga
पूर्णतामा विकसित हुन्छ।
यसैले ऊ आन्तरिक रूपले धम्मामा धम्मा
अवलोकन गर्दछ, वा ऊ धम्मा बाह्यरूपमा देख्दछ, वा ऊ आन्तरिक र बाह्य धम्ममा
धम्मा अवलोकन गर्दछ। ऊ धम्मामा घटनाको सामुदायिक अवलोकन गर्दछ, वा ऊ
धम्मामा घट्ने घटनालाई हेर्दछ, वा ऊ समदुयालाई अवलोकन गर्दै र धम्माको घटना
बित्दै जान्छ; वा अन्य, [साकार गर्दै:] “यी धम्महरू हुन्!” सती उहाँमा
अवस्थित छ, केवल सीस र मात्र प्यासीसातीको हदसम्म, उहाँ अलग्गै बस्नुहुन्छ,
र संसारको कुनै पनि कुरासँग टाँसिरहनुहुन्न। यसैकारण, भिख्खस, सात
बुज्जागसको सन्दर्भमा, धम्मामा धम्मा देख्दछन्।
भिख्खस, भिख्खु, त्यहाँ भित्र उद्दक्क-कुक्कुक्का रहेको कुरा बुझ्छ: “म
भित्र उद्दक्क-कुक्कुक्का छ”; त्यहाँ उद्दक्क-कुक्कुक्का नभएकोले उनी
बुझ्दछन्: “म भित्र कुनै उद्दक्क-कुक्कुक्का छैन”; ऊ बुझ्दछ कसरी अनारिज्ड
उद्दक्क-कुक्कुका कसरी आउँछन्; ऊ बुझ्छ कि कसरी उठेको उद्दक्क-कुक्कुका
त्यागिएको छ; र उनी बुझ्छन् कि कसरी परित्याग गरिएको उद्दक्क-कुक्कुक्का
यहाँ, भिख्खस, भिख्खु, भित्र भेसिक्ची रहेको छ,
उनीहरु बुझ्छन्: “म भित्र भेसिकिच छ”; त्यहाँ भिक्किचे छैन, उनी बुझ्छन्:
“म भित्र कुनै विकिकिचे छैन”; ऊ बुझ्दछ कसरी अनारिजिन भिक्कीच कसरी आउँछ; ऊ
बुझ्दछ कसरी उठेको भिक्कीच लाई त्यागियो; र उसले बुझ्छ कि परित्याग गरिएको
भिक्कीच भविष्यमा कसरी देखा पर्दैन।
यसैले ऊ आन्तरिक रूपले धम्मामा
धम्मा अवलोकन गर्दछ, वा ऊ धम्मा बाह्यरूपमा देख्दछ, वा ऊ आन्तरिक र बाह्य
धम्ममा धम्मा अवलोकन गर्दछ। ऊ धम्मामा घटनाको सामुदायिक अवलोकन गर्दछ, वा ऊ
धम्मामा घट्ने घटनालाई हेर्दछ, वा ऊ समदुयालाई अवलोकन गर्दै र धम्माको
घटना बित्दै जान्छ; वा अन्य, [साकार गर्दै:] “यी धम्महरू हुन्!” सती उहाँमा
अवस्थित छ, केवल सीस र मात्र प्यासीसातीको हदसम्म, उहाँ अलग्गै
बस्नुहुन्छ, र संसारको कुनै पनि कुरासँग टाँसिरहनुहुन्न। यसैकारण, भिख्खु,
धब्मामा धम्मा देख्न भिख्खू बस्दछन्, ī नववरहरुको सन्दर्भमा।
र यसका साथै भिख्खु पनि पाँच खाण्डको सन्दर्भमा धम्माको धम्मा अवलोकन
गर्दछन्। र यसका साथै, भिख्खूस, भिख्खुले कसरी पाँच खाण्डको सन्दर्भमा
धम्माको धम्मा देख्दछन्?
यहाँ, भिख्खस, भिख्खु [बुझ्छन्]: “त्यहा
रूपा हो, त्यस्तै रूपाको समुदया हो, त्यस्तै रूपाको निधन हो; त्यस्तै वेदान
हो, त्यस्तै वेदानको सामूदय हो, त्यस्तै वेदानको निधन पनि त्यस्तै हो; सास
हो, त्यस्तै सादको समुदया हो, त्यस्तै सा का निधन हो, त्यस्तै सख्कार हो,
सखारको सामूदय हो, त्यस्तै सखारको बितेको हो, त्यस्तै भ्याली हो, त्यस्तै
भियाको समुदया हो, त्यस्तै हो। viññāṇa को निधन “।
यसैले ऊ आन्तरिक
रूपले धम्मामा धम्मा अवलोकन गर्दछ, वा ऊ धम्मा बाह्यरूपमा देख्दछ, वा ऊ
आन्तरिक र बाह्य धम्ममा धम्मा अवलोकन गर्दछ। ऊ धम्मामा घटनाको सामुदायिक
अवलोकन गर्दछ, वा ऊ धम्मामा घट्ने घटनालाई हेर्दछ, वा ऊ समदुयालाई अवलोकन
गर्दै र धम्माको घटना बित्दै जान्छ; वा अन्य, [साकार गर्दै:] “यी धम्महरू
हुन्!” सती उहाँमा अवस्थित छ, केवल सीस र मात्र प्यासीसातीको हदसम्म, उहाँ
अलग्गै बस्नुहुन्छ, र संसारको कुनै पनि कुरासँग टाँसिरहनुहुन्न। यसैकारण,
भिख्खु, पाँचखण्डको सन्दर्भमा, धम्माको धम्मा अवलोकन गर्दैछ।
र यसका साथै, भिख्खस, छ भित्री र बाह्य āYYATANAS को संदर्भ संग धम्म मा
dhamas देख्नुहुन्छ। र यसका साथै, भिख्खूस, कसरी भिख्खु छः आन्तरिक र बाह्य
āयानको सन्दर्भमा धम्मामा धम्मा देख्दछन्?
यहाँ, भिख्खस, भिख्खुले
काख्कू बुझ्छ, ऊ रापलाई बुझ्छ, ऊ स्याज्यन बुझ्छ जुन यी दुईको कारणले उठ्छ,
ऊ बुझ्दछ कि कसरी अपारणीय स्याज्यन आयो, ऊ बुझ्दछ कसरी उठेको स्यायोग्य
त्यागिएको छ, र उसले बुझ्छ कि परित्याग गरिएको स्योज्यन कसरी छोड्छ।
ऊ सोटा बुझ्दछ, ऊ सद्दा बुझ्दछ, ऊ सय्योजाना बुझ्छ
जुन यी दुईको कारणले उत्पन्न हुन्छ, ऊ बुझ्दछ कसरी अज्ञानीय सोज्यना
आउँदछ, ऊ बुझ्छ कसरी उठेको स्यायोग योजना छोड्छ, र उसले बुझ्छ कि परित्याग
गरिएको सय्योजान कसरी उत्पन्न हुँदैन। भविष्यमा।
ऊ घानालाई बुझ्छ, ऊ
गन्ध बुझ्छ, ऊ यी दुईको कारणले उत्पन्न भएको सय्योजाना बुझ्छ, ऊ असह्य
सय्योजान कसरी आउँछ भनेर उसले बुझ्छ, उठेको स्याजना कसरी छोड्छ भनेर उसले
बुझ्छ, र कसरी छोडिन्छ स्योजना उठ्ने छैन भनेर उसले बुझ्छ। भविष्यमा।
ऊ जीवा बुझ्छ, ऊ रसलाई बुझ्छ, ऊ सय्योजाना बुझ्छ जुन यी दुईको कारणले
उत्पन्न हुन्छ, ऊ बुझ्दछ कसरी अज्ञानीय सोज्यना आउँदछ, ऊ बुझ्दछ कसरी उठेको
स्यायोग योजना छोड्छ, र उसले बुझ्छ कि परित्याग गरिएको सय्योजान कसरी
उत्पन्न हुँदैन। भविष्यमा।
ऊ कायालाई बुझ्दछ, ऊ फोहबह बुझ्छ, ऊ यी
दुईको कारणले उत्पन्न भएको सय्योजाना बुझ्छ, ऊ असार्य सोज्यना कसरी उत्पन्न
हुन्छ भनेर उसले बुझ्छ, उदाउँदो स्याजना कसरी छोड्छ भनेर उसले बुझ्छ, र
कसरी त्यो परित्याग गरिएको सय्योजान उत्पन्न हुँदैन भनेर उसले बुझ्छ।
र यसका साथै, भिख्खु, धममा चारवटा
आर्य-स·्को सन्दर्भमा धम्मा देख्दछन्। र यसका साथै, भिख्खुस, कसरी
भिख्खुले धम्मामा चारवटा आर्य-सc्को सन्दर्भमा धम्मा देख्दछन्?
र, भिख्खस, दुक्खा अरियसक्का के हो? जोति दुक्खा हो, बुढेसकाल दुक्खा हो
(बिमारी दुक्खा हो) मराठा दुक्खा हो, दुख, विलाप, दुखा, डोमनास र दु: ख
दुक्खा, मन नपर्ने कुराको संगति दुक्खा हो, मन परेकोबाट विच्छेदन दुखा हो,
आफूले चाहेको कुरा पाउँदैन दुक्खा हो; छोटकरीमा भन्नुपर्दा, पाँचवटा उपखण्ड
खान्धाहरू दुक्खा हुन्।
र भिख्खुस भनेको के हो? विभिन्न जीवहरूको
विभिन्न वर्गका जीवहरू, जन्ति, जन्म, वंश [गर्भमा रहेको], उत्पन्न हुने
[संसारमा], उपस्थिति, खण्डहरूको अवधारणा, आइतनको प्राप्ति। यसलाई भिख्खस
र भिख्खुस जारा के हो? विभिन्न जीवहरूका विभिन्न जीवहरूका
लागि, जारि, क्षय हुने अवस्था, दाँत भाँच्ने, खैरो कपाल भएको, झिम्काएको,
जीवनशक्तिमा खस्कने, इन्द्रीहरूको क्षय: यो, भिख्खस, Jarā भनिन्छ।
भिख्खस के हो? बिभिन्न प्राणीहरूका विभिन्न जीवहरूका लागि, धोका, अवस्था
बदल्ने अवस्था [अस्तित्वबाट बाहिर], बिच्छेद, बेपत्ता हुनु, मृत्यु,
मारियाना, बितेको, खण्डहरूको टुक्रिनु, बिछ्याउनु लासको: यो, भिख्खसलाई
र के, भिख्खस, शोक हो? एकमा, भिख्खस, विभिन्न
प्रकारका दुर्भाग्यसँग सम्बन्धित छ, विभिन्न प्रकारका दुक्खा धम्माले
छोएको, सोर्रो, शोक, शोकको स्थिति, भित्री शोक, भित्री ठूलो शोक: यो,
भिख्खसलाई दुःख भनिएको छ।
र के, भिख्खुस, विलाप गर्नु हो? एकमा,
भिख्खस, विभिन्न प्रकारका दुर्भाग्यसँग सम्बन्धित छ, विभिन्न प्रकारका
दुक्खा धम्माले छोएको छ, विलाप, विलाप, विलाप, विलाप, विलापको अवस्था:
विलाखुस, विलाप भनिन्छ।
र के, भिख्खुस, दुक्खा हो? जे भए पनि,
भिख्खस, शारीरिक दुक्खा, शारीरिक अप्रियता, दुक्खा शारीरिक सम्पर्क द्वारा
अप्रिय, अप्रिय Vedayitas: यो, भिख्खस, dukkha भनिन्छ।
डोमानास के हो? जे भए पनि, भिख्खुस, मानसिक दुक्खा, मानसिक अप्रियता,
दुक्खा मानसिक सम्पर्कको कारण ईर्ष्यालु, अप्रिय वेदितास: यो, भिख्खसलाई
र के, भिख्खुस, निराश छ? एकमा भिख्खस, विभिन्न
छोएको, समस्या, निराशा, समस्यामा परेको अवस्था, निराशाको स्थिति: यो,
भिख्खसलाई नैराश्य भनिन्छ।
र के, भिख्खस, असम्बन्धितको साथ
सम्बन्धितको दुक्खा हो? यहाँ, रूपहरु को रूप मा, ध्वनि, स्वाद, गन्ध,
शारीरिक घटना र मानसिक घटनाहरु जो अप्रिय छन्, रमाईलो छैन, अप्रिय, वा अन्य
जो एक को नुकसान चाहनेहरु, जो एक को हानि चाहान्छन्, जो एक को असहज इच्छा,
ती जो कसैको मुक्ति, भेट, सम्मेलित, सँगै हुनु, उनीहरूसँग भेटघाटबाट
स्वतन्त्र हुन चाहान्छ: यो, भिख्खसलाई असहमत कुरासँग सम्बन्धित भएको दुक्खा
र, भिख्खस, कुनचाहिँ स्वीकार्य कुराबाट अलग गरीएको छु?
यहाँ, रूपहरु को रूप मा, ध्वनि, स्वाद, गन्ध, शारीरिक घटना र मानसिक
घटनाहरु हुन् जो खुशी छन्, रमाईलो, रमाईलो, वा अन्य जो एकको फाइदा
चाहनेहरु, एकको फाइदा चाहनेहरु, एक जो आराम चाहान्छन्, ती कसैको
संलग्नताबाट छुट्टिनु, भेट नगर्नु, सँगै हुनुहुन्न, सँगै हुनु हुँदैन,
उनीहरूको सामना गर्नु पर्दैन: यो, भिख्खसलाई स्वीकार्य कुराबाट अलग हुने
दुक्खा भनिएको छ।
र के, भिख्खुस, उसले चाहेको कुरा नपाएको दुक्खा
हो? जीवहरुमा भिख्खस जन्मेको विशेषता भएकोले यस्तो चाहना आउँछ: “हो,
वास्तवमा हाम्रो निम्ति जती नहोस्, र वास्तवमा हामी जतीमा नपरौं।” तर यो
ईच्छा गरेर प्राप्त गर्न छैन। यो के चाहिन्छ भनेर पक्का नगर्नुको दुक्खा
जीवहरुमा, भिख्खस, बुढो हुनुको चरित्रको साथ, यस्तो इच्छा
उत्पन्न हुन्छ: “ओह, वास्तवमा हाम्रो लागि जारा नहोस्, र वास्तवमा हामी
जारमा नपरौं।” तर यो ईच्छा गरेर प्राप्त गर्न छैन। यो के चाहिन्छ भनेर
पक्का नगर्नुको दुक्खा हो।
जीवहरूमा भिख्खस बिरामी हुने विशेषता
राखेर यस्तो चाहना उत्पन्न हुन्छ: “ओहो, वास्तवमा हाम्रो लागि बिरामी नहोस्
र वास्तवमा हामी बिरामीमा नपरौं।” तर यो ईच्छा गरेर प्राप्त गर्न छैन। यो
के चाहिन्छ भनेर पक्का नगर्नुको दुक्खा हो।
जीवहरुमा भिख्खस, बुढो
हुनुको चरित्रको साथ यस्तो चाहना उत्पन्न हुन्छ: “ओह, वास्तवमा हाम्रोलागि
मारारा नहोस्, र वास्तवमा हामी मारारामा नपरौं।” तर यो ईच्छा गरेर प्राप्त
गर्न छैन। यो के चाहिन्छ भनेर पक्का नगर्नुको दुक्खा हो।
र यसका साथै, भिख्खुस, भिख्खुले वेदानुमा वेदानु कसरी अवलोकन गर्दछ?
यहाँ, भिख्खस, भिख्खु, सुख वेदानीको अनुभव गर्दैछ: “म सुख सुखको अनुभव
गर्दैछु”; दुक्खा वेदानुको अनुभव गर्दै, अन्डरन्ड्ड: “म दुक्खा वेदानुको
अनुभव गर्दैछु”; अदुखम-असुखी वेदानुको अनुभव गर्दै, अन्डरन्ड्ड: “म एक
अदुखम-असुखी वेदानुको अनुभव गर्दैछु”; एक सुख वेदानी समिसा अनुभव गर्दै,
अधोरेखित गर्दछ: “म एक सुख वेदानी समिमा अनुभव गर्दैछु”; सुखा वेदानी
निर्मिसाको अनुभव गर्दै, अन्डरण्ड्ड्स: “मैले सुख सुखवेदी निर्भयता अनुभव
गरिरहेको छु”; दुक्खा वेदनेस समिसाको अनुभव गर्दै, अधोरेखित गर्दछ: “म
दुक्खा वेदनेस समिसा अनुभव गर्दैछु”; दुक्खा वेदानी निर्मिसाको अनुभव
गर्दै, अन्डरण्ड्ड्स: “म दुक्खा वेदानी निर्मिसा अनुभव गर्दैछु”; एक
अदुखम-असुख वेदानी समिसा अनुभव गर्दै, अधोरेखित गर्दछ: “म एक अदुखम-असुखी
वेदनेस समिसा अनुभव गर्दैछु”; एक अदुखम-असुख वेदनि निर्मिसाको अनुभव गर्दै,
अधोरेखित गर्दछ: “म एक अदुखम-असुखी वेदानी निर्मिसा अनुभव गर्दैछु”।
यसैले ऊ आन्तरिक रूपमा वेदानमा वेदान अवलोकन गर्दछ, वा ऊ वेदानमा
बाह्यरूपमा अवलोकन गर्दछ, वा ऊ वेदानमा आन्तरिक र बाह्य रूपमा अवलोकन
गर्दछ। ऊ वेदानुमा घटनाको समुदया अवलोकन गर्दछ, वा ऊ वेदानुमा घटना घट्दै
जान्छ, वा ऊ समदुयालाई अवलोकन गर्दै र वेदानमा घटनाक्रम बित्दै जान्छ; वा
अन्य, [साकार गर्दै:] “यो वेदानु हो!” सती उहाँमा अवस्थित छ, केवल सीस र
कुरासँग टाँसिरहनुहुन्न। तसर्थ, भिख्खस, भिख्खु वेदनामा अवलोकन गर्दछ।
र यसका साथै, भिख्खुस, भिख्खुले कसरी सिट्टामा अवलोकन गर्दैछ?
यहाँ, भिख्खुले राग्दाको चिट्टालाई “रागासहितको सिट्टा” को रूपमा बुझ्दछ,
वा ऊ राग् बिना सिट्टालाई “राग्टा बिना सिट्टा” को रूपमा बुझ्छ, वा ऊ
डोसासँग सिट्टालाई “डोसासँग सिट्ट्टा” को रूपमा बुझ्छ, वा ऊ डोसाबिना
सिट्टा बुझ्दछ। “डोसा विना सिट्टा”, वा ऊ मोहासँग चिट्टालाई “मोहा संग
चिट्टा” को रूपमा बुझ्दछ, वा ऊ मोहाबिनाको सिट्टालाई “मोहाबिना चिट्टे” को
रूपमा बुझ्छ, वा उसले संकलित चिट्ठालाई “स collected्कलित चिट्टा” को रूपमा
बुझ्छ, वा ऊ बिखेरिएको बुझ्दछ। Citta “एक बिखेरिएको Citta” को रूपमा, वा ऊ
एक विस्तारित Citta “विस्तारित Citta” को रूप मा बुझ्दछ, वा ऊ एक
“विस्तारित Citta” को रूप मा एक अप्रशोधित citta बुझ्दछ, वा ऊ “एक
surpassable citta” को रूप मा एक surpassable citta बुझ्छ, वा त्यो बुझ्छ
एक असुरक्षित सिट्टा “एक असुरक्षित सिट्टा” को रूपमा, वा ऊ एउटा बसोबास
गरिएको सिट्टालाई “बसोबास गरिएको सिट्टा” को रूपमा बुझ्छ, वा ऊ एक
अनसेट्टेड चिन्तालाई “एक अप्रत्याशित चिट्टा” को रूपमा बुझ्छ, वा ऊ एक
स्वतन्त्र चिट्ठीलाई “एक स्वतन्त्र चिट्टा” को रूपमा बुझ्छ, वा ऊ
“unlibrated citta” को रूप मा unlibrated citta बुझ्दछ।
सिट्ट्मा आन्तरिक रूपमै अवलोकन गर्दछ, वा ऊ सिट्टामा बाह्यरूपमा अवलोकन
गर्दछ, वा ऊ सिट्टमा आन्तरिक र बाह्य रूपमा अवलोकन गर्दछ। उनी सिट्ट्टामा
घटनाको समुदया अवलोकन गर्दैछन्, वा उनी सिट्टामा घट्ने घटनालाई हेर्दछन्,
वा उनी समुदयालाई अवलोकन गर्दै सिट्टामा घटनाक्रम बित्दै जान्छन्; वा अन्य,
[साकार गर्दै:] “यो सिट्टा हो!” सती उहाँमा अवस्थित छ, केवल सीस र मात्र
टाँसिरहनुहुन्न। तसर्थ, भिख्खस, भिख्खु सिट्टामा अवलोकन गर्दैछ।
र यसका साथै, भिख्खुस, कसरी भिख्खुले धम्मामा धम्मा देखाउँछन्? यहाँ,
भिख्खस, भिख्खु धम्माहरुमा पाँचवटा नवाराको सन्दर्भमा धम्मा देखाउँछन्। र
यसका साथै, भिख्खूस, भिख्खुले कसरी पाँचवटा धारामा धम्मा देखाउँछन्?
यहाँ, भिख्खस, भिख्खु, भित्र कामचन्द रहेको त्यहाँले बुझ्छ: “म भित्र
कामचन्द छ”; त्यहाँ कामचन्द रहेको छैन, उनी बुझ्छन्: “म भित्र कुनै कामचन्द
छैन”; ऊ बुझ्दछ कि कसरी अनियोजित कामचान्डा उत्पन्न हुन्छ; ऊ बुझ्दछ कसरी
उठेको कामचन्द त्यागिन्छ; र उसले बुझ्छ कि परित्याग गरिएको कामचन्द
भविष्यमा कसरी आउँदैन।
यहाँ, भिख्खस, भिख्खु, भित्र बाईपास रहेको
त्यहाँले बुझ्छ: “मभित्र बाइपास छ”; त्यहाँ बाइपास नभएकोले उसले बुझ्छ:
“मभित्र कुनै बाइपास छैन”; ऊ बुझ्दछ कि अनजान बाईपाडा कसरी आउँछ; ऊ बुझ्छ
कि कसरी उठेको बाइपासलाई त्यागियो; र उसले बुझ्छ कि परित्याग गरिएको
ब्यापडा भविष्यमा कसरी देखा पर्दैन।
यहाँ, भिख्खस, भिख्खु, भित्र
थानमसिद्ध रहेको छ, र उनीहरु बुझ्दछन्: “म भित्र थिन्मिद्धि छ”; त्यहाँ
थिमनामिधि उपस्थित नभएकोले उनी बुझ्दछन्: “म भित्र कुनै थिमनिधि छैन”; ऊ
बुझ्दछ कि कसरी अज्ञात थ्यामनिधि आउँदछन्; ऊ बुझ्दछ कसरी उठेको थ्यामिनिध
त्यागिन्छ; र उनी बुझ्दछन् कि कसरी परित्याग गरिएको थाīनिमित भविष्यमा
जीवहरूमा भिख्खस, शोक, विलाप, दुक्खा, डोमनास र कष्टको
चरित्र भएको यस्तो चाहना उत्पन्न हुन्छ: “हो, वास्तवमा हाम्रो लागि शोक,
विलाप, दुखा, डोमनास र कष्ट नहोस्, र वास्तवमा हामी यो हुन सक्दैनौं दु: ख,
विलाप, दुख, डोम्नासा र संकष्टमा आउनुहोस्। ” तर यो ईच्छा गरेर प्राप्त
भिख्खूस, के छोटकरीमा पाँचवटा उपन्यासखण्डहरू हुन्? ती हुन्: राप
अपदानाकखंड, वेदान उपदानाखण्ड, सत् उपकणखंड, साखरा उपदानाखण्ड, viāa
upādānakkhandha। यिनीहरूलाई छोटो, भिख्खस, पाँच उपनाखण्डहरू भनिन्छ।
यसलाई भिख्खस भनिन्छ, दुक्खा अरियसक्का
र के, भिख्खुस, दुक्खा-समुदया अरियसक्का हो? यो ताहिह पुनर्जन्मतिर अग्रसर
हुन्छ, इच्छा र रमाईलोको साथ जोडिएको, यहाँ वा त्यहाँ रमाइलो पाउँदछ, त्यो
भन्नु हो: काम-ताहि, भव-ताहि र विभाव-ताहि। तर यो ताहिक, भिख्खस, जब खडा
हुन्छ, यो कहाँ हुन्छ र कहिले बसोबास गर्छ? संसारमा जुन रमाइलो र सहमत छ
जस्तो देखिन्छ, जहाँ ताहा हो, उठ्दा, उठ्छ, जहाँ बसोबास गर्दा, यो बसोबास
र यो संसारमा के सुखमय र सहमत छ? संसारमा आँखा रमाइलो र सहमत
छ, त्यहाँ जब, उठेको छ, उठ्छ, जब बसिरहेको छ, यो बसन्छ। कान संसारमा
रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ taṇhising, जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसाउँदा, यो
बसोबास। संसारमा नाक रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ taṇhising, जब उठ्छ, उठ्छ,
त्यहाँ जब बसिरहेको छ, यो बसन्छ। संसारमा जिब्रो रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ
taṇh when, जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ जब बसोबास, यो समाधान हुन्छ। काया
संसारमा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब, उठेको छ, उठ्छ, जब बसोबास गर्दा, यो
बस्छ। संसारमा मान मनमोहक र सहमत छ, त्यहाँ जब, उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, जब
बसोबास गर्दा, यो बस्छ।
संसारमा देखिने रूपहरू रमाईलो र सहमत छन्,
त्यहाँ जब, उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, जब बसोबास गर्दा, स्थिर हुन्छ। संसारमा
ध्वनिहरू रमाइलो र सहमत छन्, त्यहाँ जब, उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, जब बसोबास
गर्दा, यो समाधान हुन्छ। संसारमा गन्ध सुगन्धित र सहमत छन्, त्यहाँ जब,
उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, जब बस्तीमा बसेपछि, यो समाधान हुन्छ। संसारमा
स्वादहरू रमाइलो र सहमत छन्, त्यहाँ जब, उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, जब बसिरहेको
छ, यो बसाल्छ। संसारमा शारीरिक घटना रमाइलो र सहमत छन्, त्यहाँ जब, उठेको
छ, उठेको छ, जब बसोबास गर्दा, यो बस्छ। संसारमा धम्माहरु रमाईलो र सहमत
छन्, त्यहाँ जब उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, जब बसोबास गर्दा, यो बस्छ।
संसारमा नेत्रहीन दृश्य रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब, उठेको छ, उठेको छ, जब
बसोबास गर्दा, यो बस्छ। इयर-भिसा संसारमा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब,
उठेको छ, उठेको छ, जब त्यहाँ बसिरहेको छ, यो बस्छ। संसारमा नाक viññāṇa
रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ tahahā, जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसाउँदा, यो
बसोबास। संसारमा जिब्रो - viaa रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ tahahā, जब उठ्छ,
उठेको छ, जब त्यहाँ बसिरहेको छ, यो बसन्छ। Kāya-viññāṇa संसारमा रमाइलो र
सहमत छ, त्यहाँ tahahā, जब उठ्छ, उठ्छ, जब बसोबास गर्दा, यो बस्छ। संसारमा
मान- viññāṇa रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ tahahā, जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ जब
बसोबास, यो व्यवस्थित।
संसारमा नेत्र-सम्फाषा रमाइलो र सहमत छ,
त्यहाँ जब हुन्छ, उठेको छ, जब बसिरहेको छ, बसोबास गर्दछ। इयर-सम्फासा
संसारमा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब, उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, जब त्यहाँ
बसिरहेको छ, यो बसोबास गर्दछ। संसारमा नाक-सम्फास रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ
जब, उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, जब बसिरहेको छ, यो बसोबास गर्दछ। संसारमा जिब्रो
सम्भाषा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब, उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, जब बसोबास
गर्दा, यो बस्छ। संसारमा काया सम्फास रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह जब
उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्दा, यो बसोबास गर्दछ। संसारमा मान-सम्फास
रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब, उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, जब बसोबास गर्दा, यो
संसारमा आँखा सम्फासाबाट जन्मेको वेदान रमाईलो र सहमत
छ, त्यहाँ जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्ने बित्तिकै, त्यो बसोबास
गर्छ। संसारमा कान-सम्फासाबाट जन्मिएको वेदान रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब
उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्दा, यो बस्छ। संसारमा नाक-सम्फासाबाट जन्मेको
वेदान रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्दा, यो
बसोबास गर्दछ। संसारमा जिब्रो-सम्फासाबाट जन्मेका वेदान रमाईलो र सहमत छन्,
त्यहाँ जब उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्दा, यो बसोबास गर्दछ।
संसारमा काया सम्फासाबाट जन्मेको वेदान रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब उठ्छ,
उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्दा, त्यहाँ बस्छ। संसारमा मान-सम्फासबाट जन्मेको
वेदान रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्ने
बित्तिकै मिलाप हुन्छ।
संसारमा देखिने फारमहरूको सार रमाइलो र सहमत
छ, त्यहाँ जब, उठेको छ, उठेको छ, जब त्यहाँ बसिरहेको छ, यो बसोबास गर्दछ।
संसारमा आवाजहरूको सौम्य रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ
बसाउँदा, यो बसोबास गर्दछ। संसारमा सागका सासहरू रमाइलो र सहमत छन्, त्यहाँ
ताहाह जब उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्दा, स्थिर हुन्छ। संसारमा
स्वादको सास रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब, उठेको छ, उठेको छ, जब त्यहाँ
बसिरहेको छ, यो बसन्छ। संसारमा शारीरिक घटना को sa pleasant रमाइलो र सहमत
छ, त्यहाँ जब, उठेको छ, उठ्छ, जब बसोबास गर्दा, यो बस्छ। संसारमा धम्मस सास
रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्दा, यो बसोबास
संसारमा देखिने फारम [सम्बन्धित] मनपर्दो रमाइलो र सहमत छ,
त्यहाँ ताहाह जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसने बित्तिकै, यो समाधान हुन्छ।
संसारमा आवाजसँग सम्बन्धित] मनसाय रमाईलो र सहमत छ, त्यहाँ जब, उठेको छ,
उठेको छ, जब त्यहाँ बसिरहेको छ, स्थिर हुन्छ। संसारमा दुर्गन्ध [सम्बन्धित]
मनसाय रमाईलो र सहमत छ, त्यहाँ tahahising, जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ
बसाउँदा, यो समाधान हुन्छ। संसारमा स्वादको साथ [सम्बन्धित] मनसाय रमाईलो र
सहमत छ, त्यहाँ जब, उठेको छ, उठेको छ, जब त्यहाँ बसिरहेको छ, यो समाधान
हुन्छ। संसारमा शारीरिक घटनासँग सम्बन्धित [सम्बन्धित] अभिप्राय रमाइलो र
सहमत छ, त्यहाँ जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्दा, यो समाधान हुन्छ।
संसारमा धम्मा सम्बन्धी आशय मनमोहक र सहमत छ, त्यहाँ जब खडा हुन्छ, उठ्छ,
जब बसोबास गर्दछ, समाधान हुन्छ।
संसारमा देखिने फार्मका लागि ताहाह
रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह जब उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसने
बित्तिकै, यो स्थिर हुन्छ। संसारमा आवाजका लागि ताहु रमाइलो र सहमत छन्,
त्यहाँ जब, जब उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, जब बसोबास गर्दा, यो बसोबास गर्दछ।
संसारमा गन्धका लागि ताहाह रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह जब उत्पन्न
हुन्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसने बित्तिकै, यो स्थिर हुन्छ। संसारमा स्वादका लागि
ताहा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह जब उत्पन्न हुन्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसने
बित्तिकै, यो बसोबास गर्दछ। संसारमा शारीरिक घटनाका लागि ताहा रमाइलो र
सहमत छ, त्यहाँ जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसने बित्तिकै, त्यो बसोबास गर्दछ।
संसारमा धम्मासका लागि ताहा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह जब उत्पन्न
हुन्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्दा, यो बसोबास गर्दछ।
फार्मको भित्तक रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब, उठेको छ, उठेको छ, जब त्यहाँ
बसिरहेको छ, यो बसोबास गर्दछ। संसारमा आवाजहरूको भित्तक रमाइलो र सहमत छ,
त्यहाँ जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसने बित्तिकै, यो स्थिर हुन्छ। संसारमा
गन्धको भिट्काका रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब ब्यूँझन्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसने
बित्तिकै, यो स्थिर हुन्छ। संसारमा स्वादको भिट्का रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ
जब हुन्छ, उठेको छ, जब त्यहाँ बसिरहेको छ, बस्यो। संसारमा शारीरिक घटनाको
भिट्का रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब खडा हुन्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसने बित्तिकै,
यो स्थिर हुन्छ। संसारमा धम्मासको भित्तक रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब
उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्दा, यो बसोबास गर्दछ।
फार्मको विकरा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसने
बित्तिकै, यो बसोबास गर्दछ। संसारमा आवाजहरूको विकरा रमाइलो र सहमत छ,
गन्धको विकरा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसने
बित्तिकै, यो स्थिर हुन्छ। संसारमा स्वाद को विक्रेरा रमाइलो र सहमत छ,
त्यहाँ जब, उठेको छ, उठ्छ, जब बसने, त्यहाँ बसोबास। संसारमा शारीरिक घटनाको
विकरा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब उठ्छ, उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्दा, यो
बसोबास गर्दछ। संसारमा धम्माको विकरा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब उठ्छ,
उठ्छ, त्यहाँ बसोबास गर्दा, यो बसोबास गर्दछ। यसलाई भिख्खस भनिन्छ, दुक्खा ·
र के, भिख्खुस,
दुक्खा-समुदया अरियसक्का हो? यो ताहिह पुनर्जन्मतिर अग्रसर हुन्छ, इच्छा र
रमाईलोको साथ जोडिएको, यहाँ वा त्यहाँ रमाइलो पाउँदछ, त्यो भन्नु हो:
काम-ताहि, भव-ताहि र विभाव-ताहि। तर यो ताहिक, भिख्खुस, छोडिंदा, कहाँ
छोडिन्छ, र कहिले बन्द हुन्छ, त यो कहिले बन्द हुन्छ? संसारमा जुन सुखद र
स्वीकार्य देखिन्छ, जहाँ ताहा, जब त्यागिन्छ, परित्याग गरिन्छ, जहाँ बन्द
हुँदा, यो बन्द हुन्छ।
र यो संसारमा के सुखमय र सहमत छ? संसारमा
आँखा रमाइलो र स्वीकार्य छ, त्यहाँ ताहाह, छोडिंदा, छोडिन्छ, त्यहाँ
रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा कान कान रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह,
जब त्यागिन्छ, छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा नाक रमाइलो
र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह, छोडिंदा, छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द
हुन्छ। संसारमा जिब्रो रमाइलो र स्वीकार्य छ, त्यहाँ ताहाह, जब त्यागिन्छ,
छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा काया रमाइलो र सहमत छ,
त्यहाँ ताहाह, जब त्यागिन्छ, छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ।
संसारमा मान मनमोहक र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह, जब त्यागिएको छ, परित्याग
गरिएको छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ।
संसारमा देखिने रूपहरू
रमाईलो र सहमत छन्, त्यहाँ ताहाह जब छोडिन्छ, छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो
बन्द हुन्छ। संसारमा ध्वनिहरू रमाइलो र सहमत छन्, त्यहाँ ताहाह, जब
त्यागिन्छ, त्यागिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा गन्ध
सुगन्धित र स्वीकार्य छ, त्यहाँ ताहाह, छोडिंदा, छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा,
यो बन्द हुन्छ। संसारमा स्वादहरू रमाइलो र सहमत छन्, त्यहाँ जब टाढा हुन्छ,
छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा शारीरिक घटनाहरू रमाइलो र
सहमत छन्, त्यहाँ जब टाढा हुन्छ, परित्याग गरिन्छ, जब रोकिन्छ, यो बन्द
हुन्छ। संसारमा धम्माहरु रमाईलो र सहमत छन्, त्यहाँ जब त्याग गरिन्छ,
छोडिन्छ, जब रोकिन्छ, यो बन्द हुन्छ।
विश्वमा नेत्रहीन दृश्य रमाइलो
र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह जब छोडिन्छ, छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द
हुन्छ। इयर-भिआन संसारमा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाहिँ, जब त्यागिन्छ,
त्यागिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा नाक- viññāṇa रमाइलो र
सहमत छ, त्यहाँ tahahā, जब त्यागिन्छ, त्यागिन्छ, जब रोकिन्छ, यो बन्द
हुन्छ। संसारमा जिब्रो - viaa रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ tahahā, जब
त्यागिन्छ, त्याग्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा क्या-viññāṇa
रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह, छोडेर जब छोडिएको छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो
बन्द हुन्छ। संसारमा मान- viññāṇa रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ tahahā, जब
त्यागिन्छ, त्याग्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ।
नेत्र-सम्फाषा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाहिँ छोडिंदा, छोडिन्छ, जब बन्द
हुन्छ, बन्द हुन्छ। संसारमा इयर-सम्फासा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाहिँ
छोडिंदा छोडिएको छ, त्यहाँ छोड्दा, बन्द हुन्छ। संसारमा नाक-सम्फाषा रमाइलो
र स्वीकार्य छ, त्यहाँ ताहाहिँ छोडिएपछि छोडिन्छ, जब बन्द हुन्छ, बन्द
हुन्छ। संसारमा जिब्रो सम्भाषा रमाइलो र स्वीकार्य छ, त्यहाँ ताहाह छोडेर
छोडिएको छ, त्यहाँ छोड्दा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा काया सम्फास रमाइलो र
सहमत छ, त्यहाँ ताहाहिँ छोडिएपछि छोडिएको छ, त्यहाँ छोड्दा बन्द हुन्छ।
संसारमा मान-सम्फाषा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाहिँ छोडिएपछि छोडिएको छ,
जब रोकिन्छ, बन्द हुन्छ।
संसारमा आँखा सम्फासाबाट जन्मेको वेदान
रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह छोडिन्छ, छोडिन्छ, जब बन्द हुन्छ, बन्द
हुन्छ। संसारमा कान-सम्फासाबाट जन्मिएको वेदान सुखद र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह
छोडिन्छ, छोडिन्छ, जब बन्द हुन्छ, बन्द हुन्छ। संसारमा नाक-सम्फासाबाट
जन्मेको वेदान रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह छोडिन्छ, छोडिन्छ, जब बन्द
हुन्छ, बन्द हुन्छ। संसारमा जिब्रो-सम्फासाबाट जन्मेको वेदान रमाईलो र सहमत
छ, त्यहाँ ताहाह छोडिन्छ, छोडिन्छ, जब बन्द हुन्छ, बन्द हुन्छ। संसारमा
काया सम्फासाबाट जन्मिएको वेदान सुखद र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह छोडिन्छ,
छोडिन्छ, जब बन्द हुन्छ, बन्द हुन्छ। संसारमा मान-सम्पासामा जन्मिएको वेदान
सुखद र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह छोडिन्छ, छोडिन्छ, जब बन्द हुन्छ, बन्द
संसारमा देखिने रूपहरू सासँग रमाइलो र सहमत छन्, त्यहाँ
ताहाहिँ, जब त्यागिन्छ, त्यहाँ छोडिन्छ, जब रोकिन्छ, यो बन्द हुन्छ।
संसारमा आवाजहरूको सार रमाईलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह जब छोडिन्छ, छोडिन्छ,
त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा सागका सासहरू रमाइलो र सहमत छन्,
त्यहाँ ताहाह छोडिन्छ, छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा
स्वादको सास रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाहिँ छोडिएपछि छोडिन्छ, जब बन्द
हुन्छ, बन्द हुन्छ। संसारमा शारीरिक घटनाको सौभाग्य रमाइलो र सहमत छ,
त्यहाँ ताहिस्, जब त्यागिन्छ, त्यहाँ छोडिन्छ, जब रोकिन्छ, यो बन्द हुन्छ।
संसारमा धम्मस सास रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह छोडेर छोडिएको छ, त्यहाँ
छोड्दा, बन्द हुन्छ।
संसारमा देखिने फारम [सम्बन्धित] मनपर्दो
रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाहिँ, जब त्यागिन्छ, छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा,
यो बन्द हुन्छ। संसारमा ध्वनीसँग सम्बन्धित [मनसाय] मनमोहक र सहमत छ,
त्यहाँ ताहाह जब छोडिन्छ, छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा
दुर्गन्ध [सम्बन्धित] मनसाय रमाईलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह, जब त्यागिन्छ,
छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा स्वादको साथ [सम्बन्धित]
अभिप्राय रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह जब छोडिन्छ, छोडिन्छ, जब रोकिन्छ,
यो बन्द हुन्छ। संसारमा शारीरिक घटनासँग सम्बन्धित [अभिलेख] अभिप्राय
रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह, जब त्यागिन्छ, छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो
बन्द हुन्छ। संसारमा धम्मा सम्बन्धी आशय मनमोहक र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह
छोडिन्छ, छोडिन्छ, जब रोकिन्छ, यो बन्द हुन्छ।
फार्मका लागि ताहा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाहि छोडिएपछि छोडिन्छ,
त्यहाँ छोड्दा, बन्द हुन्छ। संसारमा आवाजहरूको लागि ताहा रमाइलो र सहमत छ,
गन्धका लागि ताहा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाहिँ छोडिएपछि छोडिएको छ,
त्यहाँ छोड्दा, बन्द हुन्छ। संसारमा स्वादका लागि ताहा रमाइलो र सहमत छ,
त्यहाँ ताहाहि छोडिएपछि छोडिन्छ, त्यहाँ छोड्दा बन्द हुन्छ। संसारमा
शारीरिक घटनाका लागि ताहा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहाह जब छोडिन्छ,
छोडिन्छ, त्यहाँ छोड्दा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा धम्मासका लागि ताहा रमाईलो
र सहमत छ, त्यहाँ ताहिस् जब छोडिन्छ, छोडिन्छ, जब रोकिन्छ, यो बन्द हुन्छ।
संसारमा देखिने फार्मको भित्तक रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब टाढा हुन्छ,
परित्याग गरिन्छ, जब रोकिन्छ, यो बन्द हुन्छ। संसारमा आवाजहरूको भित्तक
रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब टाढा हुन्छ, परित्याग गरिन्छ, जब रोकिन्छ, यो
बन्द हुन्छ। संसारमा गन्धको भिट्का रमाइलो र स्वीकार्य छ, त्यहाँ ताहाह
छोडिन्छ, छोडिन्छ, जब रोकिन्छ, यो बन्द हुन्छ। संसारमा स्वादको भित्तक
बन्द हुन्छ। संसारमा शारीरिक घटनाको भिट्का रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ जब
टाढा छ, छोडिन्छ, जब रोकिन्छ, यो बन्द हुन्छ। संसारमा धम्मासको भित्तक
संसारमा देखिने फार्मको विकरा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ
ताहिस्, छोडिंदा, छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा
आवाजहरूको भ्राइरा रमाइलो र स्वीकार्य छ, त्यहाँ ताहाह जब छोडिन्छ,
छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ। संसारमा गन्धको विकरा रमाइलो र
स्वीकार्य छ, त्यहाँ ताहाह छोडेर, छोडिन्छ, त्यहाँ रोकिंदा, यो बन्द हुन्छ।
संसारमा स्वादको विकरा रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहिस्, छोडिंदा, छोडिन्छ,
जब रोकिन्छ, यो बन्द हुन्छ। संसारमा शारीरिक घटनाको विकरा रमाइलो र
स्वीकार्य छ, त्यहाँ ताहाही जब छोडिन्छ, छोडिन्छ, जब रोकिन्छ, यो बन्द
हुन्छ। संसारमा धम्माको विकराल रमाइलो र सहमत छ, त्यहाँ ताहिस् जब छोडिन्छ,
छोडिन्छ, जब रोकिन्छ, यो बन्द हुन्छ। यसलाई भिख्खस भनिन्छ, दुक्खा निरोधा
र, भिख्खुस, दुक्खा
निरोधा ā gāminī paṭipadā ariyasacca हो? यो केवल यो अरियस अika्गिका मग्गा
हो, जसलाई समदधिही, सम्मास्याप्पो, समम्भासिक, समकमकन्तो, समजा-जाजाव,
सम्मास्याā्मो, सम्मासती र सम्मासमीधी भन्नु हो।
sammādiṭṭhi छ? त्यो, भिख्खस, जो दुक्खाको isa, दुक्खा-सामूदयाको,
दुखा-निरोधको oda, दुक्खा-निरोधा-गमिनी पनीपाद, जसलाई भिख्खस, सम्मदीही
र के, भिख्खुस, सम्समसप्पा हो? ती, भिख्खस, जो नेक्ख्माको
सकप्पा, अभिपदाका साकप्पा, अविशासका साकप्पा, जसलाई भिख्खस, सम्मासकप्पा
र के, भिख्खुस, साम्याभिक हो? त्यो, भिख्खस, जो मस्वादिबाट
टाढा छ, पिसुका भिस्कीबाट अलग रहन्छ, फारुसा भिक्काबाट अलग रहन्छ, र
सम्फाल्पाबाट अलग रहन्छ, जसलाई भिख्खस, सम्वाक भनिन्छ।
र भिख्खुस के
हो, sammā-kammanta? त्यो, भिख्खस, जो प्याटपिटबाट अलग रहन्छ,
अड्डिनदानाबाट अलग रहन्छ, अबब्रहकारियाबाट अलग रहन्छ, जसलाई भिख्खस,
र भिख्खुस भनेको के छ? यहाँ, भिक्खस, एक महान
चेला, गलत जीविका त्यागेर, आजीविकाको सही माध्यम द्वारा आफ्नो जीवनलाई
समर्थन गर्दछ, जसलाई, भिख्खस, सामजाजवा भनिन्छ।
sammāvāyāma हो? यहाँ, भिख्खस, unisisen pāpaka and akusala dhamas को
उत्पन्न नहुनुको लागि आफ्नो चण्डा उत्पन्न गर्दछ, ऊ आफैंको प्रयास गर्दछ,
आफ्नो विरिया चलाउँछ, जोडतोडले उसको citta लागू हुन्छ र प्रयास गर्दछ; ऊ
उठेको पपाका र अकसुला धम्मालाई त्याग्ने क्रममा उसले आफ्नो कुण्ड उत्पन्न
गर्दछ, ऊ आफैंले मिल्छ, आफ्नो वीयरियालाई उठाउँदछ, जोडतोडले उसको सिट्टा
लागू गर्दछ र संघर्ष गर्दछ; उन्निस कुसला धम्मसको उत्थानको लागि ऊ आफ्नो
चन्द्रा उत्पन्न गर्दछ, ऊ आफैंले खोज्छ, आफ्नो वीयरियालाई हुर्काउँछ,
जोडतोडले उसको सिट्टा लागू गर्दछ र प्रयास गर्दछ; ऊ उत्पन्न कुसल धम्माको
स्थिरताको लागि, आफ्नो वृद्धि, विकास, खेती र सम्पन्नताका लागि ऊ आफ्नो
चण्डा उत्पन्न गर्दछ, ऊ आफैंले मिल्छ, आफ्नो वीरियालाई बढावा दिन्छ,
जोडतोडले उसको चिट्टा लागू गर्दछ र प्रयास गर्दछ। यसलाई भनिन्छ, भिख्खस,
एक, भिख्खुस, समस्सति हो? यहाँ, भिख्खस, भिख्खु संसारको
तर्फ अभिज्या-डोमानास छोडेपछि, काल्पनिक आतिपा सम्जानो, सामिā्गमा केयाको
अवलोकन गर्दछ। ऊ वेदानुमा, वेदनेस, सम्पत्तिजानो, सतीमाको अवलोकन गर्दै,
संसारको तर्फ अभिज्या-डोमानासा छोडे। उनी सिट्टामा सिट्टा अवलोकन गर्दैछन्,
amptāpī samjīāno, satiā, abhijjhā-domanassa को संसारमा छोडेपछि। ऊ
धम्ममा धम्मका अवलोकन गर्दछ, धम्पा सम्पत्ति, सामति, संसारको तर्फ
अभिज-डोमानास छोडेपछि। यसलाई भनिन्छ, भिख्खस, सामसती।
भिख्खुस, sammāsamādhi छ? यहाँ, भिख्खु, भिख्खु, कामाबाट छुट्टिएका, अकसुला
धम्माबाट अलग्गिएका, पहिलो झण्डामा प्रवेश गरेपछि, विटकक्का र विक्रालमा,
पट्टी र सुक्खाबाट छुट्टिएर जन्मेका थिए। भिट्टाक्क-भेस्राको स्थिरतापछि,
दोस्रो झ्नामा प्रवेश गरेपछि उनी त्यहाँ भित्री ट्याqu्कीलाइजेशन, सिट्ट्को
एकीकरण, विटक्क वा विक्राल बिना, समृद्धिबाट जन्मेका पाती र सुखका साथ
बस्छन्। र पाटीप्रति उदासीनताका साथ उनी उपेखा, सतो र सम्पजानोमा रहन्छन्, ऊ
किर्य सुखमा अनुभव गर्दछ जुन अरियसले वर्णन गरेको छ: ‘जो बराबर र दिमाग
भएको छ [यस] सुखमा रहन्छ’, तेस्रो झण्डामा प्रवेश गरेपछि ऊ बस्छ। यसमा सुख
त्यागेर दुक्खा, सोमानास र डोमनास त्याग्नु पर्‍यो, सुख र दुक्खा बिना नै
वेपत्ता र सतीको शुद्धतासहित चौथो झण्डामा प्रवेश गरेपछि उनी त्यहाँ
बस्छन्। यसलाई bhikhus, sammāsamādhi भनिन्छ।
यसलाई भिख्खस भनिन्छ, दुक्खा निरोधा ā gāminī paṭipadā ariyasacca।
समदुयालाई अवलोकन गर्दै र धम्माको घटना बित्दै जान्छ; वा अन्य, [साकार
टाँसिरहनुहुन्न। तसर्थ, भिख्खु, धम्मामा धम्मा अवलोकन गर्दै भिख्खू बस्थे,
चारवटा आर्य-स to्को सन्दर्भमा।
सतीपाṭṭनास अभ्यास गर्दा हुने फाइदाहरू
जो कोही, भिख्खुसले four बर्षसम्म यी चार सतीपर्णाहरू अभ्यास गर्दछन्, दुई
मध्ये एक परिणामको आशा गर्न सकिन्छ: या त [परिपूर्ण] दृश्य घटनामा ज्ञान,
वा यदि त्यहाँ केही टाँसेको भए पनि, अन्जगमिता।
सात वर्ष भिक्खुस जो
कोही, भिख्खुसले four बर्षसम्म यी चार सतीपहन्नाहरूको अभ्यास गर्दछ, दुई
वा यदि त्यहाँ बाँकी रहेको छ भने, अā्गमिता।
छ वर्ष, भिख्खुस एक्लै
छोडिदिनुहोस्। जो कोही, भिख्खुसले four बर्ष सम्म यस्तै चार सतीपह्नना
अभ्यास गर्दछ, दुई मध्ये एक परिणामको आशा गर्न सकिन्छ: या त [परिपूर्ण]
दृश्य घटनामा ज्ञान, वा यदि त्यहाँ चिप्लिएर छोडियो भने, अन्जगमित।
भिख्खूस, एक्लै पाँच वर्ष दिनुहोस्। जो कोही, भिख्खुसले four बर्ष सम्म
यस्तै चार सतीपह्नना अभ्यास गर्दछ, दुई मध्ये एक परिणामको आशा गर्न सकिन्छ:
या त [परिपूर्ण] दृश्य घटनामा ज्ञान, वा यदि त्यहाँ बाँकी रहेको छ भने,
चार वर्ष भिक्खुस जो कोही, भिख्खुसले four बर्षसम्म यी
चार सतीपर्णाहरू अभ्यास गर्दछन्, दुई मध्ये एक परिणामको आशा गर्न सकिन्छ:
या त [परिपूर्ण] दृश्य घटनामा ज्ञान, वा यदि त्यहाँ केही टाँसेको भए पनि,
भिख्खुस, तीन वर्ष मात्र एक्लो रहन दिनुहोस्। जो कोही,
भिख्खुसले दुई बर्षसम्म यी चार सतीपर्णाहरू अभ्यास गर्दछन्, दुई मध्ये एक
परिणामको आशा गर्न सकिन्छ: या त [परिपूर्ण] दृश्य घटनामा ज्ञान, वा यदि
त्यहाँ चिप्लिएर छोडियो भने, अन्जगमित।
दुई वर्ष, भिख्खुस एक्लै
छोडिदिनुहोस्। जो कोही, भिख्खुसले एक बर्षसम्म यी चार सतीपहणना अभ्यास
गर्दछन्, दुई मध्ये एक परिणामको आशा गर्न सकिन्छ: या त [परिपूर्ण] दृश्य
घटनामा ज्ञान, वा यदि त्यहाँ बाँकी रहेको छ भने, अā्गमिता।
एक्लो छोड्नुहोस्, भिख्खुस। जो कोही, भिख्खुसले sa महिनासम्म यी चार
सतीपर्णाहरू अभ्यास गर्दछन्, दुई मध्ये एक परिणामको आशा गर्न सकिन्छ: या त
[परिपूर्ण] दृश्य घटनामा ज्ञान, वा यदि त्यहाँ केही टाँसिए पनि भने,
भिक्खस, सात महिना मात्र एक्लो रहन दिनुहोस्। जो कोही,
भिख्खुसले four महिनासम्म यी चार सतीपर्णाहरू अभ्यास गर्दछन्, दुई मध्ये एक
त्यहाँ बाँकी रहेको छ भने, अā्गमिता।
छ महिनासम्म एक्लो छोड्नुहोस्,
भिख्खुस। जो कोही, भिख्खुसले four महिनासम्म यी चार सतीपर्णाहरू अभ्यास
घटनामा ज्ञान, वा यदि त्यहाँ केही टाँसिए पनि भने, अā्गमिता।
महिना मात्र दिनुहोस्, भिख्खस। जो कोही, भिख्खुसले यी चार सतीपहन्नाहरु लाई
चार महीना सम्म अभ्यास गर्थे, दुई मध्ये एक परिणामको आशा गर्न सकिन्छ: कि त
[परिपूर्ण] दृश्य घटनामा ज्ञान, वा यदि त्यहाँ चिप्लिएर छोडियो भने,
चार महिना मात्र दिनुहोस्, भिख्खस। जो कोही, भिख्खुसले
four महिनासम्म यस्तै गरी चार सतीपह्नना अभ्यास गर्दछ, दुई मध्ये एक
तीन महिना मात्र दिनुहोस्,
भिख्खस। जो कोही, भिख्खुसले यी चार सतीपर्णाहरू दुई महिनासम्म अभ्यास
महिना मात्र दिनुहोस्, भिख्खस। जो कोही, भिख्खुसले यी चार सतीपर्णाहरू एक
महिनाको लागि अभ्यास गर्दछन्, दुई मध्ये एक परिणामको आशा गर्न सकिन्छ: या त
एक महिना मात्र दिनुहोस्, भिख्खस। जो कोही, भिख्खुसले आधा
महिनासम्म यी चार सतीपहणना अभ्यास गर्दछन्, दुई मध्ये एक परिणामको आशा
गर्न सकिन्छ: या त [परिपूर्ण] दृश्य घटनामा ज्ञान, वा यदि त्यहाँ बाँकी
रहेको छ भने, एन्जमिटता।
आधा महिना एक्लै छोड्नुहोस्, भिख्खस। जो
कोही, भिख्खुसले एक हप्तासम्म यी चार सतीपर्णाहरू अभ्यास गर्दछन्, दुई
वा यदि त्यहाँ केही टाँसिए पनि भने, अन्जगमिता।
“यो, भिख्खुस, त्यो
मार्ग हो जसले मानिसहरुको शुद्धिकरण, दु: ख र विलापको पराजय, दुक्खा-डोमनास
गायब हुनु, सही मार्गको प्राप्ति, निब्बनाको बोध, अरु चारै तिर जान्छ।
“satipaṭṭhānas। यसैले यो भनिएको छ, र यो सबैको आधारमा यो भनिएको छ।
यसरी भगव बोले। रमाए, भिख्खसले भगवको वचनलाई स्वागत गरे।